မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ shared ။ (၂၀၀၄) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲအာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ shared ။ (2004)
မှတ်ချက်များ - လေ့လာမှုအရ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဦး နှောက်လုပ်ငန်းစဉ်၌စွဲလမ်းမှုသည်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်တူညီသော circuit များ (medial forebrain bundle) တွင်အတူတူပင်အဓိကပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Neuron 2004 စက်တင်ဘာ 30; 44 (1): 161-79 ။
စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံသင်တန်းဌာန၊ Wisconsin-Madison ဆေးကျောင်း၊ 6001 Research Park Boulevard, Madison, WI 53719, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရေးကြီးသောအယူအဆရေးရာတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးစွဲမှုဖြစ်စဉ်သည်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့နှင့်ဆက်နွယ်သောအာရုံကြောပလပ်စတစ်နှင့်အတူတူညီသည့်အချက်များကိုခွဲခြားထားကြောင်းနားလည်မှုပင်ဖြစ်သည်။ dopamine, glutamate နှင့်၎င်းတို့၏ဆဲလ်များနှင့် Genomics ပစ်မှတ်များပါဝင်သောအခြေခံယန္တရားများသည်ဤသုတေသနareaရိယာ၌အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ cortex, limbic system နှင့် basal ganglia ဒေသများစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေထားသောဤ neurotransmitter system နှစ်ခုသည်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်အဓိကပေါင်းစည်းမှုအခန်းကဏ္ play မှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဤလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်သူတို့၏အဓိကသက်ရောက်မှုများကိုတိတိကျကျကျင့်သုံးပြီးတွန်းအားပေးသည့်ကွန်ယက်များတွင်တည်မြဲသောဆယ်လူလာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်သဘာ ၀ အရမကောင်းသောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်လက်ရှိသီအိုရီများနှင့်သုတေသန dopamine D-1 နှင့်အချိုမှု NMDA အချက်ပြခြင်း, ဆာပသင်ယူမှုနှင့်မူးယစ်ဆေး cue အေးစက်၏ဆယ်လူလာ, မော်လီကျူးနှင့်အမူအကျင့်ရှုထောင့်အပေါ်အထူးအလေးပေးနှင့်အတူတစ် ဦး ပေါင်းစည်းစနစ်များရှုထောင့်ကနေပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းမှာတစ်ချိန်ချိန်မှာလူတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးတွေကိုစတင်သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ကိုကာကိုလာအပင်အသုံးပြုမှုကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း (၇၀၀၀) တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် betal nut (arecoline, muscarinic agonist ပါ ၀ င်သော) သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကထိုင်းနိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁၀၀၀ နှင့်တီမော၌လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Sullivan နှင့် Hagen, 2002)။ အမှန်မှာစက်ရုံ alkaloids နှင့် ဦး နှောက် neurotransmitter များအကြားနီးကပ်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများနှင့်ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်များတွင်ဓာတုထုတ်လွှင့်စက်များနှင့်အပင်မှဆင်းသက်လာသောမူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည့်ဓာတုထုတ်လွှင့်စက်များ၊ Cannabinoids၊ နီကိုတင်း၊ ကိုကင်းနှင့် opiates တို့သည်ဤဒြပ်ပေါင်းများကိုအထူးသဖြင့် ဦး နှောက်ပရိုတိန်းအလွှာအပေါ်သက်ရောက်သည်။ အရက်လည်းသွယ်ဝိုက်သည်ဤအလွှာကိုသက်ရောက်သည်။ လူသားများတွင်ဤအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု (သို့) အပျော်သဘောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သောအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုသက်သာစေသည်။ (Nesse နှင့် Berridge, 1997)။ သို့ရာတွင်အားနည်းချက်ရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်အမူအကျင့်များနှင့်ပြင်းထန်သောဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်မှီခိုမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပွားစေသည်။ Koob et al ။ 2004 နှင့် Volkow နှင့်မုဆိုး 2000။ စွဲလမ်းမှု၏ပဟေuzzleိသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း Clinician၊ စိတ်ပညာရှင်နှင့်ဆေးဝါးဗေဒပညာရှင်များ၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကသာမော်လီကျူး၊ သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံပညာတွင်တိုးတက်မှုသည်ဤပြproblemနာကိုချဉ်းကပ်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ထားသောမူဘောင်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အထင်ရှားဆုံးအယူအဆရေးရာတိုးတက်မှုစွဲ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသဘာဝဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောပလပ်စတစ်နှင့်အတူတူညီဒီကဗျာဝေမျှသောကြီးထွားလာနားလည်မှုရှိပါသည်။ အထူးသ dopamine, glutamate နှင့်၎င်းတို့၏ဆဲလ်နှင့် Genomics ပစ်မှတ်များပါဝင်သောအခြေခံဆယ်လူလာယန္တရားများသည်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ပြင်းထန်သောသုတေသန၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ cortex၊ limbic system နှင့် basal ganglia ဒေသများစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေထားသော neurotransmitter system နှစ်ခုသည်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်အဓိကပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် dopamine D-1 နှင့် glutamate မှတစ်ဆင့် dopaminergic နှင့် glutamatergic systems ၏မော်လီကျူးအချက်ပြမှုသည်ညှိနှိုင်းကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ N-methyl-D-aspartate (NMDA) နှင့်α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) receptors, intra-cellular transcriptional နှင့် translational cascades ၏ induction တွင်အရေးပါသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု, အပြောင်းအလဲမြန်သောပြောင်းလဲမှုများ မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်နှင့် Synaptic ပလပ်စတစ်၊ အာရုံကြောကွန်ယက်များပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အပြုအမူ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဦး နှောက်သည်သက်ရှိများအားတုံ့ပြန်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤယန္တရားများကိုအသုံးပြုသည်။ အစားအစာကိုမည်သည့်နေရာတွင်တွေ့ရှိသည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရသည်ကိုလေ့လာရန်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းလဲရန်မှာအလွန်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သူတို့၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဤလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တိကျစွာသက်ရောက်နိုင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကွန်ယက်များတွင်ကာလရှည်၊ အမြဲတမ်းပင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သဖြင့်ပုံမမှန်သည့်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် Berke နှင့် Hyman 2000, Hyman နှင့် Malenka 2001, ကယ်လီနှင့် Berridge 2002 နှင့် Koob နှင့် Le Moal 1997.
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အဓိကအားဖြင့် dopaminergic နှင့် glutamatergic အာရုံခံကွန်ယက်များနှင့်သူတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးပလပ်စတစ်နှင့်ကိုက်ညီမော်လီကျူးစနစ်များ၏အစောပိုင်း phylogenetic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအလေးပေး, တစ် ဦး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အခြေအနေတွင်ဇီဝလှုံ့ဆျောမှုနှင့်၎င်း၏အာရုံကြောအခြေခံများ၏ပြproblemနာကိုစဉ်းစားပါ။ Synaptic plasticity နှင့် adaptive motor သင်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော dopamine နှင့် glutamate-coded စနစ်များကိုလက်ရှိသုတေသနပြုပြန်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်နှင့်မှတ်မိဖို့နှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲအကြားမျှဝေယန္တရားများနှင့်ပတ်သက်။ မျဉ်းပြိုင်ဆွဲရန်ကြိုးစား။ အခြေခံယန္တရားများကိုထွန်းလင်းပေးသည့်အပြင်အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်စနစ်များရှိပလတ်စတစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း (စွဲလမ်းမှု) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအပါဆုံးသောသဘာဝဆုလာဘ်ဖြစ်သောအစားအစာ (အဝလွန်ခြင်း) သည်သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း ၂၁ ရာစုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောအဓိကကျသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြtogetherနာများကိုအတူတကွဖွဲ့စည်းထားသည်။
မှတ်ဥာဏ်နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်၎င်းတို့သည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုရှုထောင့်မှလုပ်ဆောင်သောစနစ်များကိုအရင်စဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ချိန်ချိန်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Homo Sapiensတစ် ဦး ချင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤအပြုအမူများသည်ရိုင်းသောအပင်များတွင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုမတော်တဆထိတွေ့ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာအထောက်အထားများအရသြစတြေးလျားရှိဘော်ရီဂျင်နီများသည်ဒေသခံနီကိုတင်းပါဝင်သောအပင်များကိုကိုလိုနီများမလာမီနှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ (Sullivan နှင့် Hagen, 2002)တောင်အမေရိကရှိအင်ဒီးယန်းဒေသရှိဒေသခံများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ကမစိုက်ပျိုးမီကိုကာကိုလာကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ကိုကောင်းစွာတွေ့ရှိရသည် (Schultes၊ ၁၉၈၇)။ Fructivore ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများသည်နှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ငှက်များနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများစားသုံးမှည့်သောအသီးများတွင်အရက်ပမာဏနည်းပါးစွာသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးအချဉ်ပေါက်သောအရက်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းများကနှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ (Dudley၊ ၂၀၀၂)။ ရှင်းနေသည်မှာ၊ အတင်းအဓမ္မစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အဓိပ္ပါယ်အားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာ ၀ တ္ထုများရရှိရန်အပြုအမူများကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အားဖြည့်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများသည်လူ့ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ကြွက်များ၊ ကြွက်များနှင့်လူသားမဟုတ်သောမျောက်များကဲ့သို့သောမျိုးစိတ်များစွာသည်အရက်၊ ဘိန်းဖြူနှင့်အခြားဘိန်းများ၊ ဆေးခြောက်၊ ဆေးခြောက်၊ နီကိုတင်း၊ ကိုကင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များသည်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုသွေးကြောသွင်းရန်အတွက်ဥပမာအားဖြင့်လီဗာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ရေအဖြစ် Aigner နှင့် Balster 1978 နှင့် Bozarth နှင့်ပညာရှိ 1985။ ထူးခြားသည်မှာ ၅ ရက်ကြာကြွက်ကလေးများသည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ဆက်နွယ်သောအနံ့များကိုပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်သင်ယူခြင်းဖြစ်သည် (Kehoe and Blass, ၁၉၈၆); တောင်မှ crayfish psychostimulants မှအပြုသဘောနေရာအရပ်အေးစက်ပြသပါ (Panksepp နှင့် Huber, 2004)။ ဒီဥပမာအားလုံးမှာသတိပြုပါ။ သင်ယူမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည် - သက်ရှိသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအချို့အဆင့်ကိုထင်ဟပ်စေသောအပြုအမူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကိုပြသသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုတိကျစွာပြောရလျှင်၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်စေသောပြည်နယ်၏တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်တွေ့ရှိချက် phyla ဖြတ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆုချီးမြှင့်ကြောင်းဘုံဓာတုနှင့်မော်လီကျူးအလွှာရှိပါတယ်မသာပေမယ့်မူးယစ်ဆေး - သက်ရှိအပြန်အလှန်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ပလပ်စတစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဘာကြောင့်အဲလိုဖြစ်ရတာလဲ
အကျိုးရှိသောအဖြစ်အပျက်များသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိပလပ်စတစ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေကြောင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုမီအရေးကြီးသောနေရာနှစ်ခုမှစတင်ခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်။ ပထမ ဦး စွာတိကျသောနှင့် phylogenetically ရှေးခေတ်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကို ဦး နှောက်ထဲမှာတည်ရှိပြီးလိုက်လျောညီထွေနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသေချာစေရန်နှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲပါပြီ။ လှုံ့ဆော်မှု၏မူလအရင်းအမြစ်များကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အစောဆုံးဘဝပုံစံဖြစ်သောဘက်တီးရီးယားများ၌ပင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ, အီး coli ဘက်တီးရီးယားများသည်ရှုပ်ထွေးသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်သကြားကဲ့သို့သောအာဟာရများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အဆိပ်များမှဝေးကွာစေသည် Adler 1966 နှင့် Qi နှင့် Adler 1989။ ဒုတိယအချက်မှာဤစနစ်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသောအခါယာယီအင်အားကြီးမားသောမောင်းနှင်သူများနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူကိုထိန်းသိမ်းသူများဖြစ်သောတိကျသောအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောအခြေအနေများ (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သက်ရှိများကိုအကျိုးရှိသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့်အစားအစာ၊ ရေ၊ နယ်မြေ၊ မိတ်လိုက်သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်စေသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများသည်သက်ရှိကိုအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အဓိကအားဖြင့်တိုက်လေယာဉ်မှူးတုံ့ပြန်မှုများသို့မဟုတ်လက်အောက်ခံအပြုအမူသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်း၊ နယ်မြေနှင့်ပေါက်ဘော်များအားကာကွယ်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုမှကာကွယ်ရန်စသည့်သင့်လျော်သောကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုသေချာစေသည်။ ဦး နှောက်စနစ်များသည်ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်း (ကိုယ်ခန္ဓာ) ကမ္ဘာကိုအချက်ပြမှုအတွက်စောင့်ကြည့်ပြီးထိုစိတ်ခံစားမှုများ၏စီးဆင်းမှုနှင့်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထို့အပြင်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်စတင်ခြင်းအတွက်ဓာတုနှင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာလက်မှတ် (ဥပမာ - monoamines၊ G ပရိုတင်း - စုံလင်သော receptors, protein kinases, CREB) သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးအလွန်အမင်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ (ကယ်လီ၊ ၂၀၀၄ က).
ပထမ ဦး ဆုံးရူပီးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ ဦး နှောက်တွင်မိတ်လိုက်ခြင်း၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးခြင်းစသည့်သီးခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရွေးချယ်ထားသောစနစ်များပါ ၀ င်သည်။ သက်ဆိုင်ရာစနစ်များဟာကျောရိုးမဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာရှိတယ်။ စိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် neuroanatomical မူဘောင်ကို“ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံ” ဟုခေါ်သောအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ မကြာသေးမီကကျယ်ပြန့်စွာတီထွင်ခဲ့သည် (Swanson, ၂၀၀၀)။ Swanson သည် hypothalamus နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားသော nuclei အစုများနှင့် ၄ င်း၏ brainstem extensions များသည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သောတိကျသောအပြုအမူများ၏အသေးစိတ်ပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ နာတာရှည် transections နှင့်အတူ hypothalamus နှမြောသောတိရိစ္ဆာန်များကူးယူစား, သောက်, မျိုးပွားခြင်းနှင့်ခုခံကာကွယ်အပြုအမူကိုပြသနိုင်ပါတယ် - သော်လည်း, ဦး နှောက် hypothalamus အောက်တွင်ကူးယူလျှင်, တိရိစ္ဆာန်မော်တာပုံစံမီးစက်အားဖြင့် enabled ဤအပြုအမူ၏အပိုင်းအစများသာပြသ အဆိုပါ brainstem ၌တည်၏။ ရှုပ်ထွေးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဟော်မုန်းဆိုင်ရာကုဒ်စနစ်များသည် opioids မှကြွက်ငယ်ကလေးငယ်များအနေဖြင့်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုညွှန်ကြားသည့်လိင် steroids များအထိစိတ်ဆင်းရဲစေသည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအထိတစ် ဦး ချင်းနှင့်မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်တည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ငတ်မွတ်မှု၊ ရေငတ်မှု၊ လိင်၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်လေ၊ ရေ၊ အမိုးအကာသို့မဟုတ်နယ်မြေလိုအပ်ချက်တို့သည်သက်ရှိများအားအခြေခံအားဖြင့်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
စိတ်လှုံ့ဆော်မှုစနစ်များကိုထိရောက်သောပြည်နယ်များမှရလဒ်, Salient Stimuli အားဖြင့် activated နေကြသည်
သို့သော်ဤပြည်နယ်များသည်အသက်ရှူခြင်းမှအပကျန်အချိန်များတွင်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ အထူးအခြေအနေများ၊ အခြေအနေများသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်တွန်းအားပေးသောဆားကစ်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ ဒုတိယရူပဗေဒကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်၊ ဤလမ်းကြောင်းများသည်တိကျသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာ (အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပ) လှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်အာရုံခံအခြေအနေများဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးအားဖြည့်ခြင်း ထိခိုက် or စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း။ ဒါဟာလှုံ့ဆျောမှုက "ကြောင်း postulated ခဲ့တာအလားအလာ"အပြုအမူထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုစနစ်သို့ built သောအပြုအမူသည် (ဘာ့၊ ၁၉၉၉)။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည် ဖတ်ပြသည် ဤအထူးရည်ရွယ်ချက်စနစ်များကိုဖွင့်သောအခါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပေါ်ထွန်းခြင်း အလားအလာများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သက်ရှိအားလုံးသည်ခြိမ်းခြောက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါခုခံကာကွယ်ရန်အပြုအမူအတွက်အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းထားသောယန္တရားများရှိသည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေသောအခါ, စနစ်များကို activated နေကြသည်နှင့်မျိုးစိတ် - မျိုးစိတ်ခုခံကာကွယ်အပြုအမူ ensue ။ ထို့ကြောင့်အာရုံကြောနှင့်ဓာတုဗေဒစနစ်များသည်စားသုံးရန်၊ ကျူးကျော်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တည်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင် (စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟူသောဝေါဟာရ၏လက်တင်အရင်းအမြစ်) ကိုသာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်တမ်းတိုသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ရှုပ်စေသောစိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှု၊ အရက်သို့မဟုတ်ဘန်ဇိုဒီးဇက်ပင်းများ၊ နီကိုတင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း)၊ အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်များနှင့်၎င်းတို့အားနှောက်ယှက်ခြင်းများကိုအာရုံခံစားမှု၏အနားယူခြင်းအခြေအနေ။ ဤအအတွေးအခေါ်များကိုသိထားသည့်အမြင် Nesse နှင့် Berridge (၁၉၉၇) ပြထားတယ် ပုံ 1.
ပုံ 1 ။ စာသားထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ခွန်အားနိုး - စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနားလည်ရန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာမူဘောင်စွဲလမ်းစေသောအလားအလာရှိသောဆေးဝါးများသည်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအပေါ်ပြုမူလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်များတွင်စူးရှသောပုဂ္ဂလဒိive္စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်ရေရှည် neuroadaptations များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (တှငျဆှေးနှေးအတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံပြီး Ness နှင့် Berridge, 1997ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်
မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဦး နှောက်တိုက်နယ်
အထက်ပါအကောင့်ကလှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုစောင့်ရှောက်သောတိကျသော ဦး နှောက်ကွန်ယက်များရှိပြီးထိုကွန်ယက်အတွင်းရှိလုပ်ဆောင်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှု (ပလပ်စတစ်) သည် extracellular နှင့် intracellular molecular signalling ဖြင့်ဖွင့်ထားကြောင်းအကြံပြုသည်။ မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းဤကွန်ရက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ အသိပညာသည်သူတို့၏အလုပ်လုပ်ပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ ဆက်သွယ်မှု၊ အာရုံကြောဓာတုနှင့် neurohumoral ပေါင်းစည်းမှု၊ မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ၊ ဤအပိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဓိကကျသောအချက်များနှင့်အခြေခံကွန်ယက်များ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်လေ့ရှိသော ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်လမ်းကြောင်းများကိုအထူးအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပြန်လည်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများစွာသည်စာဖတ်သူကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဦး နှောက် neuroarchitecture ၏သီအိုရီဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်ရည်ညွှန်းသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ Risold et al ။ 1997 နှင့် Swanson 2000။ နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအားဖြင့် corticothalamostriatal ဆားကစ်၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်မော်လီကျူးရှုပ်ထွေးမှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့် Hard-wired hypothalamic-brainstem ဆားကစ်များ (“ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံများ” သို့မဟုတ်အထူးရည်ရွယ်ထားသောစနစ်များ) နှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ cortex နှင့် striatum ကဲ့သို့သောဆက်စပ်နေရာများ၏ကြွယ်ဝသောပလပ်စတစ်ကြောင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းစနစ်များကိုသက်ဝင်စေသောဆေးများအပေါ်အလွန်အမင်းအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပုံ2ဤအသက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောစနစ်များ၏တစ် ဦး ပုံပေးပါသည်။
ပုံ2။ သင်ယူခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်တိုက်နယ်အပေါ်သိထားသည့်အမြင်အဓိက neurotransmitter အဖြစ် glutamate မှကူးယူထားသောလမ်းကြောင်းများကို dopamine လမ်းကြောင်းများအနီရောင်ဖြင့်ပြပြီးအပြာဖြင့်ပြသည်။ အဆိုပါနှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus (LH) မှပေါ်ပေါက် Tan လိုင်းများမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, hypothalamus မှ neocortex နှင့် forebrain limbic အဆောက်အ ဦ များမှကျယ်ပြန့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်စီမံချက်များကိုညွှန်ပြ Swanson (2000).
Subcortical အထူးရည်ရွယ်ချက်စနစ်များနှင့် Expanded Neocortex အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
လှုံ့ဆော်မှုရှိသောဤအပြုအမူ၏အခြေခံမော်ဒယ်၏အဓိကအချက်မှာ၎င်းသည် hypothalamic စနစ်များအတွက်အဓိကသွင်းအားစုများ၊ အခြားအဓိက ဦး နှောက်ဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်၎င်း၏ပစ်မှတ်များကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံ 2) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစိတ်ခွန်အားနိုးသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစနစ်များကိုတိကျသောအချက်ပြမှု - စွမ်းအင်လိုငွေပြမှု၊ osmotic မညီမျှမှု၊ olfactory အချက်များ၊ လှုံ့ဆော်မှုကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း - သည်စနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေပြီး ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများ၌လှုပ်ရှားမှုများကိုအစပြု (အဆုံးသတ်သည်) ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ။ ပိုမိုမြင့်မားသောနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်အာရုံခံစနစ်မှအာရုံကြောနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများသည်ခန္ဓာဗေဒနှင့် neuroendocrine လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်အပြုအမူထိန်းချုပ်သည့်ကော်လံသို့နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောက်ရှိသည်။ သို့သော်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံတွင်အရေးပါသောဒုတိယပါဝင်မှုမှာ ဦး နှောက် cortex မှဖြစ်သည်။ Hippocampus, amygdala, prefrontal cortex, striatum နှင့် pallidum ကဲ့သို့သောနေရာများမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် afferents များဖြစ်သည်။ ဤသွင်းအားစုများမှတစ်ဆင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသောအဓိကသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်တွက်ချက်မှု၊ သိမြင်မှုနှင့် ဦး နှောက် cortex ၏ဆက်စပ်မှုစွမ်းရည်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ hippocampus သည်ဆက်စပ်နေသောမှတ်ဉာဏ်ကွန်ယက်များ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို encoding လုပ်ခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအကြားဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းတို့တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ (Morris et al ။ , 2003)။ subiculum မှ Hippocampal သွင်းအားစုများသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများကိုထိန်းချုပ်ရန်အဓိက Spatial သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကော်လံ၏ caudal ရှုထောင့်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အရွက်ဆဲလ်များကို mammillary body များ၊ hippocampus၊ anterior thalamus နှင့် striatum တို့တွင်တွေ့ရသည်။ တိုနီဘလဲ et al ။ 1998 နှင့် Ragozzino et al ။ ၂၀၀၁။ ဆုချီးမြှင့်အဘိုးပြတ်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအတွက် amygdala ရဲ့အခန်းကဏ္။ Cardinal et al ။ 2002 နှင့် Schoenbaum et al ။ 2000အထူးသဖြင့်ယင်း၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့် basolateral ရှုထောင့်များတွင် (frontotemporal Association cortex နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသော) နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကဤအယူအဆကိုထောက်ခံကြပြီ amygdalo- နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamic လမ်းကြောင်း၏ပြတ်တောက် per se အစားအစာစားသုံးမှုဖျက်သိမ်းပေမယ့်သင်ယူမှုသို့မဟုတ်အာရုံခံတွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအစားအစာများ၏နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးကို၏သိမ်မွေ့အကဲဖြတ်ပြောင်းလဲ (Petrovich et al ။ , 2002)။ ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးမီကလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်အချို့တွင် amygdala အား inactivation လုပ်ခြင်းက striatal-hypothalamic circuitry များမှကမကထပြုသည့်အူလမ်းကြောင်းအပြုအမူကိုဖော်ပြခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည် (Will et al ။ , 2004)။ prefrontal cortex သည်စေ့ဆော်မှုဆိုင်ရာကွန်ယက်၏အရေးကြီးသောအပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများကိုဖျန်ဖြေခြင်း၊ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်တုန့်ပြန်မှုလမ်းညွှန်; အခြား cortical ဒေသများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအပြင်၎င်းသည် hypothalamus သို့ကျယ်ပြန့်စွာထုတ်လုပ်သည် (Floyd et al ။ , 2001)။ hypothalamo-brainstem လမ်းကြောင်းများလွှမ်းမိုးမှုအပြင်၊ ဤအဓိကသော့ cortical ဒေသများဖြစ်သော hippocampus, amygdala နှင့် prefrontal cortex - စီမံကိန်းအား striatum သို့ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ပုံ 2) ။ အဆိုပါ thalamus လည်း neocortex နှင့် striatum အားလုံးမှသိပ်သည်း glutamate-coded စီမံချက်များပေးပို့သည်။ ဤဒေသများအားလုံးသည် glutamate receptors ၏အဓိကအမျိုးအစားခွဲများမြင့်မားသောအဆင့်များ - NMDA, AMPA / kainate နှင့် metabotropic receptors ။ လှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်၍ glutamate-coded synaptic modification သည် ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိရေရှည်ပလပ်စတစ်မှုအတွက်အဓိကပုံစံဖြစ်သည်။ (Malenka နှင့် Nicoll, 1999)အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဤရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်များတွင် glutamatergic လုပ်ဆောင်မှုသည်ကွန်ယက်နှင့်သက်ရှိများ၏အပြုအမူကိုအခြေခံအားဖြင့်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဤတိုက်နယ်များအတွင်းရှိပလပ်စတစ်အတွက်နောက်ထပ်သော့ချက်မှာ dopamine (DA) ဖြစ်သည်။ Dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်များသည် midbrain တွင်ရှိပြီး ventral tegmental andရိယာနှင့် sustia nigra အတွင်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ axon များကို medial forebrain အစုအဝေးမှတစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစနစ်များအတွင်းရှိကျယ်ပြန့်သောဒေသများဖြစ်သောအထူးသဖြင့် striatum, prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus ။ Dopaminergic reception ည့်ခံခြင်းနှင့် DA အချက်ပြခြင်း၏ intracellular သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, G ပရိုတိန်း -coupled DA receptors နှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားခွဲများ, D-1 မိသားစု (D-1 နှင့် D-5) နှင့် D-2 မိသားစု (D-2/3 နှင့်မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့နေကြသည် D-4) ။ ဤအ forebrain ဒေသများ innervate သော serotonin နှင့် norepinephrine ကဲ့သို့သောအခြား amines လည်း synaptic ပလပ်စတစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ have ရှိသည်ဖြစ်။ , သို့သော်စွဲလမ်းမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏အဓိကသီအိုရီများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် dopamine ၏အခန်းကဏ္ based အပေါ်အခြေခံထားခြင်းကြောင့်ယခုဆွေးနွေးမှုသည်ဤစနစ်၏အချိုမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အငြင်းအခုံနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်သည် dopaminergic နှင့် glutamatergic ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူတူပင် dendritic spines များနှင့်နီးကပ်စွာရှိသည်။ Sesack နှင့် Pickel 1990, Smith ကနှင့် Bolam 1990 နှင့် Totterdell နှင့် Smith 1989။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျအတွက်ဒီအစီအစဉ်၏ဥပမာထဲမှာပြသနေသည် ပုံ 3.
ပုံ3။ Glutamate နှင့် Dopamine ပါ ၀ င်သည့် Axon များသည် Striatal နှင့်အခြား Corticolimbic ဒေသများရှိ Dendritic Spines များသို့ပြောင်းသည်။(က) striatum မှ striatal အလတ်စား spiny neuron ၏ဥပမာတစ်ခု။ ပုံမှန်ဆဲလ်တစ်ခုသည်ကျယ်ပြန့်သော dendritic နှင့် axonal arborizations များရှိပြီး dendrites များသည် sprusions (spines) များစွာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။(ခ) တူညီသော dendritic ကျောရိုးအပေါ်အနီးကပ် apposition အတွက် synapsing cortex သို့မဟုတ် thalamic ဒေသများမှ midbrain နှင့် glutamatergic input ကိုကနေ dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိတဲ့ dendrite ၏အနီးကပ် -up, သိထားအမြင်။ ဤအစီအစဉ်ကိုအလယ်အလတ် spiny neuron များအတွက်ပြသပြီးဖြစ်သော်လည်းအခြားသော့ချက်ဒေသများရှိ (ဥပမာ prefrontal cortex နှင့် basocateral amygdala ၏ magnocellualar အာရုံခံ၏ pyramidal cells) တွင်ရှိ neuron များအတွက်တည်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ (ကနေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Smith ကနှင့် Bolam, 1990ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံအတွက် dopamine (DA) နှင့်အချိုမှု (GLU) အချက်ပြ၏ (ဂ) ဆယ်လူလာ convergence ။ ဤသည် convergence စာသားထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, intracellular transduction ယန္တရားများ, စည်းမျဉ်းကူးယူအချက်များ၏ induction နှင့်နောက်ဆုံးမှာ, postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်းများပြားလှသောပါဝင်သောဆယ်လူလာပလပ်စတစ်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုမှ ဦး ဆောင်နေသည်။ (မှ Adapted Berke နှင့် Hyman, 2000ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်
cortical နှင့် striatal ဒေသများရှိဆယ်လူလာပလပ်စတစ်အတွက်အလားအလာသည် brainstem နှင့် hypothalamic system များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ အမှန်မှာ၊ ဗီဇဖော်ပြချက်ပုံစံများသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဤတိုးချဲ့မှုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပရိုတိန်း kinases, CREB, ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇနှင့် postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်းအဖြစ်ပလပ်စတစ် -related မျိုးဗီဇ, corticostriatal ဆားကစ်အတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံနေကြသည်။ ငါတို့ရဲ့ပစ္စည်းကနေဥပမာပြပါ ပုံ 4, diencephalic အဆောက်အ ဦ များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် cortex နှင့် striatum, ဗီဇ၏ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်ကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြောင်းပြသ zif268 (စအဖြစ်လူသိများ NGFI-A), glutamate- နှင့် dopamine-mediated ပလပ်စတစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါတစ်ကူးယူအချက် Keefe နှင့် Gerfen 1996 နှင့် ဝမ်နှင့်မက်ဂျင်တီ 1996။ ထို့ကြောင့် phylogenetically မကြာသေးမီကတီထွင်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ ဦး နှောက်ဒေသ (neocortex) ဘက်ပေါင်းစုံဘိုးဘွားအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးရှုပ်ထွေးဆယ်လူလာပလပ်စတစ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ4။ အဆိုပါချက်ချင်းအစောပိုင်း Gene ၏ဖော်ပြချက် zif268 Corticostriatal ဒေသများရှိမြင့်မားသည်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ၏ဖော်ပြချက်ဖေါ်ပြခြင်းကြွက် ဦး နှောက်၏ Immunostained အပိုင်း zif268 ဆယ်လူလာပလပ်စတစ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော (NGFI-A ဟုလည်းလူသိများ) ။ Zif268 dopamine နှင့် glutamate မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်အခြေခံရေရှည်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ အနက်ရောင်အစက်တစ်ခုစီသည်ဆဲလ်တစ်ခုအတွင်းရှိနျူကလီးယားအစွန်းအထင်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ cortical, hippocampal, striatal နှင့် amygdala ဒေသများ (A-C) တွင်ပြင်းထန်စွာဖော်ပြခြင်းနှင့် diencephalic inရိယာများ (D) တွင် ပို၍ အားနည်းသောစကားရပ်ကိုသတိပြုပါ။ ဤသည်ဗီဇနှင့်တူသောအခြားသူများကို ဦး စားပေးအပြုအမူပလပ်စတစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော corticolimbic နှင့် striatal ဆားကစ်ထဲမှာဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ (အတည်မပြုရသေးသောပစ္စည်းမှ။ )
ဟူသောဝေါဟာရကို၏မူလအစအကြံပြုအဖြစ်, လှုံ့ဆျောမှုနောက်ဆုံးမှာအပြုအမူလုပ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်များ၏မော်တာ outputs အချက်ပြသောအခါ - အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပေါ် - အလိုအလျောက် output ကို (နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား), visceroendocrine output ကို (cortisol, adrenaline, လိင်ဟော်မုန်းများထုတ်လွှတ်), သို့မဟုတ် somatomotor output ကို (ဥပမာ, ရွေ့လျားမှု, တူရိယာအပြုအမူ, မျက်နှာ / ခံတွင်းတုံ့ပြန်မှု, ခုခံကာကွယ်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ကိုယ်ဟန်အနေအထား) ။ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများကိုညှိနှိုင်းဖော်ပြသည့်အခါဤ effector စနစ်များကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ အမှန်မှာ၊ အပြုအမူထိန်းချုပ်မှုကော်လံအားလုံးသည်ဤမော်တာ effector လမ်းကြောင်းများသို့တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပြုသည် ပုံ 2) ။ သို့သော်နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်သတိရှိရှိ၊ လုပ်အားပေးထိန်းချုပ်မှုများကိုအခြေခံအာရုံခံကိရိယာ - တုံ့ပြန်မှုကွန်ယက်များ၌ cortical systems များထပ်မံပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဦး နှောက် hemisphere နှင့်မော်တာ effector ကွန်ယက်များအကြားကျယ်ပြန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံများကိုဖွဲ့စည်းရန်နောက်ထပ်အဓိကနိယာမတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်အကြီးအကျယ်စီမံခြင်းဖြစ်သည် ပြန်. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း dorsal thalamus ကနေတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနှောက်နှောက် / cortex ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆီကို ပုံ2Risold et al ။ 1997 နှင့် Swanson 2000။ ဥပမာအားဖြင့်, hypothalamus တစ်ခုလုံးနီးပါးသည် dorsal thalamus သို့ပရောဂျက်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် neocortex ၏ကျယ်ပြန့်သောဒေသများသို့စီမံကိန်းများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသော neuropeptide-coded system များက neocortex အတွင်းရှိကျယ်ပြန့်သောဒေသများသို့ endocrine၊ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိသည့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus အတွင်းရှိ orexin / hypocretin- နှင့် melanin ပါဝင်သောဆဲလ်များသည်ဟော်မုန်းပါဝင်သောဆဲလ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ amygdala, hippocampus နှင့် ventral striatum နှင့်အပြုအမူပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်နှိုးဆွများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည် Baldo et al ။ 2003, Espana et al ။ ၂၀၀၁ နှင့် Peyron et al ။ 1998. ပုံ5ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှ hypothalamically innerverv forebrain ဒေသများ၏ဥပမာကိုပြသသည် (Baldo et al ။ , 2003)။ အဆိုပါ ဦး နှောက် hemisphere မှဤ feedforward hypothalamic စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံစိတ်ခွန်အားနိုးကွန်ယက်များမှဆက်စပ်မှုနှင့်သိမြင် cortical ဒေသများ၏ရင်းနှီးစွာဝင်ရောက်ခွင့်စိတ်ခံစားမှု၏မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်၏ပေါ်ထွန်းခြင်း, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆများကိုဆုပ်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခန္ဓာဗေဒအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မျောက် ဦး နှောက်ထဲတွင် phylogenetically အဟောင်းအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကော်လံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်ဖြစ်စဉ်များ subserving ပိုမိုမကြာသေးမီကတီထွင် cortex အကြားကဒီသိသိသာသာအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်နှစ်လမ်းလမ်း enabled သိရသည်။ မိမိဆန္ဒအလျောက်မော်တာလုပ်ဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်သောဆားကစ်များသည်အခြေခံ drives များကို အခြေခံ၍ မောင်းနှင်နိုင်သည်သာမကအဓိကလှုံ့ဆော်မှုကွန်ယက်အတွင်းရှိလုပ်ဆောင်မှုများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောင်များကိုသိမြင်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ပေးစွမ်းနိုင်ပြီးသတိစိတ်ကိုအလွယ်တကူမရစေနိုင်သည်။ ဤအယူအဆသည်အလေ့အကျင့်နှင့်အလိုအလျှောက်ယန္တရားများကိုအလေးပေးသောစွဲလမ်းမှုသီအိုရီအချို့တွင်ပြသခဲ့သည်။ Everitt et al ။ 2001 နှင့် Tiffany နှင့် Conklin 2000), စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအပါအဝင်လူတို့၏စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကို, နားလည်သဘောပေါက်ရန်သော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပုံ5။ Diencephalic ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Neocortex အကြားဆက်သွယ်ရေး၏ဥပမာ(က) neuropeptides နှစ်ခု၊ orexin / hypocretin (အညိုရောင်) နှင့် melanin ပါဝင်သောဟော်မုန်း (အပြာရောင်) အတွက်အစွန်းအထင်းသည်ကြွက်များ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus အတွင်း immunopositive ဆဲလ်များအစုအဝေးကိုဖော်ပြသည်။ ဤဆဲလ်အတော်များများသည်ပလတ်စတစ်နှင့်ပတ်သက်သော forebrain ဒေသများ (ဥပမာ - B) တွင်ဖော်ပြထားသည့် medial prefrontal cortex ကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်စွာရှိသည်။ မှောင်မိုက်နေသည့်မြင်ကွင်းသည် cortex ၏ medial နံရံ၌အမျှင်များစွာကိုပြသသည်။ (Baldo et al မှစ။ , 2003) ။
Dopamine- နှင့် glutamate အစပြုပလပ်စတစ် - ဆဲလ်မှအပြုအမူအထိ
ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအဆင့်တွင် dopamine နှင့် glutamate-coded အချက်ပြမှုများကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည် corticostriatal ကွန်ယက်များတွင်ရေရှည်ပလပ်စတစ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှုကိုအခြေခံသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိနေသည်။ အမှန်မှာ၊ အဓိကလက်ရှိမော်ဒယ်က dopaminergic နှင့် glutamatergic အချက်ပြမှုများသည်ဆဲလ်များ (ဥပမာ striatum အတွင်းရှိအလတ်စား spiny neurons သို့မဟုတ် cortex အတွင်းရှိပိရမစ်ဆဲလ်များ) သည်ဆက်စပ်မှုလေ့လာခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသောအရာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်ဟုအကြံပြုသည် Berke နှင့် Hyman 2000, Horvitz ၂၀၀၂, Kelley et al ။ 2003, Reynolds နှင့် Wickens 2002 နှင့် Sutton နှင့် Beninger 1999။ dopamine အာရုံခံများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောအရကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အဓိကဖြစ်ရပ်များကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောအရတုံ့ပြန်ရန်စဉ်းစားနေစဉ်ထို့ကြောင့် glutamate သည် cortico-cortical, corticostriatal နှင့် thalamocortical system များ၌တိကျသောအာရုံခံကိရိယာ၊ motor နှင့် mnemonic အချက်အလက်များကို encode လုပ်သည်။ Horvitz ၂၀၀၂ နှင့် Schultz 2002။ ဤစနစ်နှစ်ခုလုံး၏ညှိနှိုင်းအချက်ပြမှုသည် synaptic configurations ကိုပုံဖော်ရာတွင်နှင့်အာရုံကြောအင်emblesများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲရာတွင်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
လေ့လာခဲ့သောမော်ဒယ်စနစ်များတွင်အဓိကအားဖြင့် dorsal နှင့် ventral striatum နှင့် prefrontal cortex တို့တွင် dopamine input သည်အထူးသဖြင့် D-1 receptors ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အမြှေးပါးအလားအလာရှိသည့်လှိုင်းများနှင့်ဝင်လာသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချက်ပြမှုများကိုဘက်လိုက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ပိရမစ်နှင့်အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကအားဖြင့် K ကမောင်းနှင်အလွန်အနုတ်လက္ခဏာအနားယူအမြှေးပါးအလားအလာအားဖြင့်နီးပါးတိတ်ဆိတ်စွာကျင်းပခဲ့တယ်+ ရေစီးကြောင်းများ (“ down state”)၊ သူတို့သည်အခြေအနေအားအခါအားလျော်စွာပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသည့်“ အထက်သို့” သို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်၊ (Wilson နှင့် Kawaguchi, 1996)။ ဆဲလ်များပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်သဟဇာတအချက်ပြမှုများကို motor output ဒေသများသို့ပို့ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောဤအခြေအနေများသည် ဦး နှောက် cortex နှင့် thalamus တို့၏ input အပေါ်မူတည်သည်။ O'Donnell နှင့် Grace 1995 နှင့် Wilson က 1995။ ဤရွေ့ကားအသွင်ကူးပြောင်းမှုစနစ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်သတင်းစီးဆင်းမှုတံခါး၏နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အရေးပါဖြစ်။ , cortex မှကြီးမားသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်သွင်းအားစုသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည့်အတွင်းပိုတက်စီယမ်ရေစီးကြောင်းများကိုမပြုပြင်ဘဲအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အဓိကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချက်ပြမှုများကိုစုစည်းထားခြင်းသည်လက်ရှိနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောသွင်းအားစုများကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော excitatory AMPA- နှင့် NMDA-mediated current များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်, dopamine ဒီရွေးချယ်မှုဖြစ်စဉ်ကို modulates နှင့်၎င်း၏ postsynaptic သက်ရောက်မှုအကြီးအကျယ်လက်ရှိအမြှေးပါးအလားအလာပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, D-1 အဲဒီ receptor activation နှစ်ခုသည်အဓိက postsynaptic သက်ရောက်မှုများရှိပုံရသည်။ ထို့အပြင်ဆယ်လူလာပလပ်စတစ်အတွက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရွေးချယ်ထားသည့် corticostriatal ensemble နှင့်အားကောင်းသည့်အပြုအမူအသစ်များ၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လိုအပ်သည်။ ဒါဘယ်လိုဖြစ်သလဲ
ပထမ ဦး စွာ, D-1 အဲဒီ receptor activation နှစ် ဦး စလုံး K သည်နှင့်အတူအရေးကြီးသော interaction ကရှိပါတယ်+ လိုင်းများနှင့် L-type ကို Ca2+ လိုင်းများ။ D-1 activation သည် K ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်+ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၏ဖိနှိပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်, ငြိမ်ဝပ်အလားအလာအနီးရှိရေစီးကြောင်း (Pacheco-Cano et al ။ , 1996)။ သို့သော်ပိုမို depolarized ပြည်နယ်များအနီး, D-1 ဆွဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်; က တိုး L-type ကို Ca ၏တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှား2+ ရေစီးကြောင်း (Hernandez-Lopez et al ။ , 1997)။ striatum နှင့် cortex လေ့လာမှုများစွာအရ dopamine D-1 receptor activation သည် NMDA-evoked excitations ကိုတိုးစေသည်။ Cepeda et al ။ 1993, Cepeda et al ။ 1998, Harvey နှင့် Lacey 1997 နှင့် ဝမ်နှင့် O'Donnell 2001။ အဆိုပါ prefrontal cortex (PFC) အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ Seamans နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက D-1 agonists သည် excitatory postsynaptic current ၏စဉ်ဆက်မပြတ် (NMDA-mediated) အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီ neuromodulatory ယန္တရားမှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပြုထား (Seamans et al ။ , 2001)။ DA အချက်ပြမှုသည်ပြည်နယ်များအားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်သြဇာညောင်းသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ဟူသောနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, prefrontal အာရုံခံအတွက်တက်ပြည်နယ်များမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို D-1 ရန်၏လျှောက်လွှာများကပိတ်ဆို့ထားပါသည် (Lewis နှင့် O'Donnell, 2000); အလားတူရလဒ် striatal အာရုံခံအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (West and Grace, ၂၀၀၂).
electrophysiological နည်းစနစ်များနှင့်စနစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည် slice work နှင့် vivo models တွင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်သင်ယူခြင်းကိုဆုချသည့်လမ်းကြောင်းများရှိကွန်ယက်၏ပလပ်စတစ်မှုအကြောင်းကိုများစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်မှသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိပါသည်။ cortical သွင်းအားကို Striatal cells သို့လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းသည် LTP သို့မဟုတ် LTD ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Pennartz et al ။ 1993, Centonze et al ။ 2003, မေတ္တာရှင် et al ။ 2003, Nicola et al ။ 2000 နှင့် Reynolds နှင့် Wickens 2002။ ဥပမာအားဖြင့်, LTE striatal ချပ်အတွက် dopamine D-1 activation နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမှု input ကို၏ယာယီတိုက်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည် Kerr နှင့် Wickens 2001 နှင့် Wickens et al ။ 1996။ ventral striatum မှ hippocampal သို့မဟုတ် amygdala afferents ၏လှုံ့ဆော်မှုရေရှည်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပေါ်သည် (Mulder et al ။ , 1997)နှင့်ဤသွင်းအားစုများအကြားအရေးကြီးသော interaction ကသို့မဟုတ်တံခါး၏သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (Mulder et al ။ , 1998)။ Floresco နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဒီဖြစ်စဉ်တွင် D-1 နှင့် NMDA receptors ပါဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည် Floresco et al ။ 2001a နှင့် Floresco et al ။ 2001b။ Jay နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် D-1 နှင့် NMDA-dependant အချက်ပြခြင်းနှင့်စနစ်များပလတ်စတစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော intracellular ဖြစ်ရပ်များ၏အခန်းကဏ္furtherကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်, hippocampal-prefrontal synapses အတွက်ရေရှည်အာနိသင် DA D-1 နှင့် NMDA receptors ၏ coactivation အဖြစ် PKA ပါဝင်သော intracellular ကက်စကိတ်အပေါ်မူတည် Gurden et al ။ 1999, Gurden et al ။ 2000, ဂျေး et al ။ 1995 နှင့် ဂျေး et al ။ 1998။ အမှန်မှာ၊ hippocampus သည် ventral striatum အတွင်းရှိ synaptic ပေါင်းစည်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးပါသောဒေသတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ventral striatal neuron များရှိပြည်နယ်များကိုထိန်းသိမ်းရန် (ထို့ကြောင့် sping spike) လိုအပ်သည်။ Goto နှင့် O'Donnell က ventral hippocampus နှင့် ventral striatum အကြားတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် (Goto နှင့် O'Donnell, 2001) နှင့် prefrontal နှင့်အခြား limbic (ဥပမာ amygdala, hippocampus, paraventricular thalamus) သွင်းအားစုများအကြား synaptic convergence ၏ယာယီအဖွဲ့အစည်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ input ကိုရွေးချယ်ရေးနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုထောက်လှမ်းဘို့သက်သေအထောက်အထားပေး (Goto နှင့် O'Donnell, 2002)။ အတူတူယူ, neurophysiological ဒေတာ၏ဤအထင်ကြီးခင်းကျင်း corticothalamic striatal ကွန်ယက်များတွင်မျိုးစုံ node များမှာ DA- နှင့်အချိုမှု -mediated အချက်ပြ၏ Synaptic ပေါင်းစည်းမှု, အသစ်သင်ယူမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအာရုံကြော activation ပုံစံများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအယူအဆအဘို့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုပေးစွမ်းသည်။
မော်လီကျူးနှင့် Genomics ချဉ်းကပ်မှု
DA နှင့် glutamate အချက်ပြမှု၏ extracellular ယာယီညှိနှိုင်းမှုသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုခွင့်ပြုပါကဤအချက်ပြမှုသည်အချို့သောဗီဇများကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပရိုတိန်းများပေါင်းစပ်ခြင်းကဲ့သို့သောသိသိသာသာ AMP နှင့်ပရိုတိန်း kinases များကဲ့သို့သော intracellular signal transduction molecules များ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်ထင်ဟပ်ရမည်။ သရက်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည်လေ့လာမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်သောအနှစ်ချုပ်များ (ဥပမာ - အာဗေလနှင့် Lattal 2001, Kandel ၂၀၀၁ နှင့် မောရစ် et al ။ 2003) ။ ဤတွင်ငါ corticostriatal ကွန်ယက်များတွင်လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်အထူးဆက်စပ်မှုရှိစေခြင်းငှါကူးယူခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ချက်အတွက် DA- နှင့်အချိုမှု -mediated ပြောင်းလဲမှုဥပမာများအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်။ cortex ရှိပိရမစ်ဆဲလ်များ၏ dendritic spines နှင့် ventral နှင့် dorsal striatum ရှိ spiny neuron များသည် synaptic ပြုပြင်ခြင်း၏အဓိကနေရာဖြစ်သည် (ရည်ညွှန်းသည်) ပုံ 3) ။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း dopaminergic နှင့် glutamatergic axon များသည် dendritic spines များနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးကပ်စွာဆုံကြသည်။ Sesack နှင့် Pickel 1990, Smith ကနှင့် Bolam 1990 နှင့် Totterdell နှင့် Smith 1989။ ရေရှည်ပလပ်စတစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုကိုတုန့်ပြန်မှု၏အခြေခံအတွင်းရှိဆဲလ်အတွင်းရှိဆဲလ်များထဲမှဇီဝဓါတုဗေဒအဆက်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအချိုမှု synapses မှာလုပ်ဆောင်မှု NPADA လိုင်းများမှတဆင့်ကယ်လစီယမ်၏အဓိကစီးမှုအရာ AMPA receptors နှင့်ဗို့ - မှီခို NMDA receptors ၏ activation ပါဝငျသညျ။ Dopamine သည် D-1 နှင့် D-2 (G protein coupled) receptors များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့် cAMP ၏ဖော်ပြချက်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ ဤဒုတိယစာပို့သူအမျိုးမျိုးသည် PKA, PKC, CaMK နှင့် ERK / MAP / RSK kinases များအပါအ ၀ င်မျိုးစုံ kinase လမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်စေသည်၊ ၎င်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်၊ ကယ်လစီယမ်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် CREB ကဲ့သို့သောအဓိကကူးယူထားသောဒြပ်စင်များပေါ်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း။ CREB ၏ Phosphorylation သည် CREB ကိုမျိုးဗီဇများစွာတွင်တုန့်ပြန်မှုဒြပ်စင်များနှင့်ပေါင်းစပ်စေပြီးမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်နှင့် synaptic ပရိုတိန်းများပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည်။ CREB သည် glutamate နှင့် dopamine အချက်ပြမှုကို transduce calcium နှင့် PKA နှစ်မျိုးစလုံးမှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ဆက်စပ်မှုလေ့လာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်။ (ဆေးလ်ဗား et al ။ , 1998)။ intracellular protein DARPP-32 နှင့်၎င်း၏အဓိကပစ်မှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော protein phosphatase-1 (PP-1) သည်များစွာသော intracellular effectors များ၏ phosphorylation state ကိုသိသိသာသာထိန်းညှိပေးသည်။ (Greengard et al ။ , 1998)။ Synaptic plasticity ၏အစောပိုင်းအဖြစ်အပျက်သည်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဖြူးသော်လည်းအထူးသဖြင့် c- corticostriatal အဆောက်အ ဦ များ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇများနှင့်ကူးယူထားသောအချက်များများစွာကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။fos, c-ဇွန်, NGFI-B, မင်္ဂလာပါ, ania ၃, စက်ဝိုင်းနှင့် zif268 (NGFI-A၊ krox-24) ။ ဤဗီဇများစွာကို induction NMDA နှင့် DA D-1 dependant ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, CREB ၏ phosphorylation နှင့်အစောပိုင်းတုံ့ပြန်မှုဗီဇ၏ induction NMDA နှင့် / သို့မဟုတ် D-1 ရန်သူများကပိတ်ဆို့ထားသည် Das et al ။ 1997, Konradi et al ။ ၁၉၉၆, Liste et al ။ 1997, Steiner နှင့် Kitai 2000, ဘဏ္ewာစိုးနှင့် Worley 2001b နှင့် ဝမ် et al ။ 1994။ ထို့ကြောင့် dopaminergic နှင့် glutamate-regulated ဇီဝဓါတုဗေဒလမ်းကြောင်းများအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (အကျဉ်းချုပ်ကဲ့သို့) ပုံ 3ဤအယန္တရားများတည်ငြိမ်သော synaptic ပြောင်းလဲမှုနှင့်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုသို့ဘာသာပြန်ဆိုဘယ်လိုပေမယ့်)) ။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောမကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များသည်ဤစိန်ခေါ်မှုကွာဟချက်များကိုပေါင်းကူးပေးရာတွင်သုတေသနအတွက်လမ်းညွှန်အသစ်များဖြစ်သည်။ ဤအရာအချို့သည် glutamate နှင့် D-1 receptors အကြားဝတ္ထုအပြန်အလှန်အာရုံစိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, အာရုံခံဆဲလ်အတွင်း convergence အချက်ပြမှုများအပြင်, D-1 နှင့် NMDA receptors အကြားတိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ Hippocampal တစ်သျှူးတွင်အလွန်မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက NMDA receptor ၏ NR1-1a နှင့် NR1A subunits များနှင့်အပြန်အလှန် D-2 receptor ၏ carboxyl tail တွင် NMDA receptors ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းညှိပေးသောပရိုတိန်း - ပရိုတိန်းများအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသည်။ Lee က et al ။ 2002 နှင့် Pei et al ။ 2004။ ဤသည်အပြန်အလှန် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတိုးမြှင့်ပလပ်စတစ်များအတွက်အလားအလာအခြေခံပေး, D-1 receptors ၏တိုးမြှင့်ပလာစမာအမြှေးပါးသွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးနှင့်အညီ, ယဉ်ကျေးမှု striatal အာရုံခံအတွက် NMDA အဲဒီ receptor ၏ activation ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းကနေ dendritic ကျောရိုး၏ plasma အမြှေးပါးသို့ D-1 (ဒါပေမယ့်မ D-2) receptors ၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်, ထို့အပြင် adenylate cyclase လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအလုပ်လုပ်တိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့ (Scott et al ။ , 2002)။ ထူးခြားသည်မှာအပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းသည်အနည်းဆုံး AMPA receptors များအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနျူကလိယ၌ D1 receptors ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းသည်အာရုံခံဆဲလ်များကို accumbens လုပ်ခြင်းသည်မျက်နှာပြင် AMPA (gluR1) receptor expression ကိုတိုးစေသည်။ (Chao et al ။ , 2002), PKA အပေါ်မှီခိုဖြစ်စဉ်တစ်ခု (Mangiavacchi နှင့် Wolf, 2004).
NMDA-D-1 အပြန်အလှန်အားဖြင့်သွေးဆောင် Translational အပြောင်းအလဲများကိုသို့နောက်ထပ်ထိုးထွင်းသိမြင် dendritic synaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်း၏အဖှဲ့အစညျးမှာပရိုတိန်းပေါင်းစပ်အပေါ်အလုပ်အားဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ပစ်မှတ်ထားသည့် mRNAs ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အလုပ်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် စက်ဝိုင်း (လှုပ်ရှားမှု - စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် cytoskeletal ပရိုတိန်း) နှင့် CaMKII (ဘဏ္wardာစိုးနှင့် Schuman, 2001). စက်ဝိုင်း အစောပိုင်းတုန့်ပြန်မှုမျိုးဗီဇဖြစ်ပြီး mRNA သည်မကြာသေးမီက activated synaptic sites များအားပစ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်ဘာသာပြန်နှင့် postynaptic သိပ်သည်းဆရှုပ်ထွေးသောနေရာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ (ဘဏ္wardာစိုးနှင့် Worley, 2001a)။ NMDA receptors antagonists များ၏ဒေသဆိုင်ရာပြုတ်ရည်ကဤရွေးချယ်သော activation နှင့် targeting ကိုပိတ်ဆို့ထားသည် (ဘဏ္wardာစိုးနှင့် Worley, 2001b)။ ထို့ကြောင့် Arc သည် NMDA receptor နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရှိပြီး dendritic spine ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသော synapses ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ငြမ်းအတွက်အထောက်အကူပြုသောပရိုတင်းများ (ဥပမာ - PSD-95, Shank, Homer, အနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြခြင်း) မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းရေး (Sheng နှင့် Lee၊ ၂၀၀၀).
အလိုက်အလိုက်အပြုအမူ၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ဆုလာဘ် - Dendrites မှသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအထိဖြစ်သည်
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာအချိုမှုန့် - dopamine အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသောဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဖြစ်စဉ်များသည်သင်ယူမှုကိုထင်ဟပ်စေသောအပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်ပုံကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားများအပေါ်ဆယ်လူလာအခြေခံတွင်စာပေများစွာရှိသော်လည်းဤဆွေးနွေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောကိရိယာများသင်ကြားခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါမည်။ အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးရလဒ်ရရှိရန်အလို့ငှာအသစ်တုံ့ပြန်မှုအသစ်တစ်ခုကိုသက်ရှိတစ် ဦး သည်လေ့လာသင်ယူသည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ယူခြင်း (ဆာလောင်နေသည့်အခါအစားအစာကို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ အန္တရာယ်သို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်း) သည်အမူအကျင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုအရှိဆုံးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dickinson နှင့် Balleine 1994 နှင့် Rescorla 1991။ အမှန်ပင်ပင် Aplysia တစ် ဦး သင်ယူဆာပတုံ့ပြန်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ပါတယ် သိသာထင်ရှားစွာ dopamine သည်ဤတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Brembs et al ။ , 2002)။ တုံ့ပြန်မှုသင်ယူမှုသည်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ရလဒ် (သို့) ရည်မှန်းချက် (“ ဆုလာဘ်”) အကြားအရေးပေါ်အခြေအနေရှိသည့်ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (သို့မဟုတ်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှု) မှကမကထပြုသည်။ အများကြီးပင်ကိုယ်မူလအလုပ်တိရိစ္ဆာန်များအရေးပေါ်၏ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အရေးပေါ်ပြောင်းလဲမှု, စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ, အားဖြည့်များ၏လက်ရှိနှင့်အတိတ်တန်ဖိုးကိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ် Colwill နှင့် Rescorla 1990 နှင့် Dickinson နှင့် Balleine 1994။ ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်သောလာကြသော Pavlovian အချက်များ၊ လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အခင်းအကျင်းများသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ယူခြင်းအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Cardinal et al ။ 2002 နှင့် Rescorla 1991။ Rescorla ကကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ယူခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှု (သို့) လုပ်ဆောင်မှု၊ ရလဒ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်နှင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်နေစဉ်အတွင်းအဓိကကျသောအချက်သုံးချက်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန် binary အသင်းများကိုမျှဝေရန်အဆိုပြုထားသည်။ binary အသင်းများသည်လှုံ့ဆော်မှုအားတုန့်ပြန်မှုရလဒ်ရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအဆင့်ဆင့်ကိုယ်စားပြုမှုများသို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားနိုင်သည်။ ပုံ 6).
ပုံ6။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုသည် Stimuli၊ Motor Responses နှင့် Rewards တို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုးစုံပါ ၀ င်သည်(က) Binary အသင်းအဖွဲ့များပရိယာယ်လေ့ကျင့်ရေးစဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော်မှု (S) နှင့်တုန့်ပြန် (R) အကြား, တုန့်ပြန်မှုနှင့်ရလဒ် (အို) အကြားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ရလဒ်အကြားသင်ယူကြသည်။ (ခ) ဒါဟာ binary အသင်းအဖွဲ့များကိုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှု - ရလဒ်ကိုကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအဆင့်ဆင့်ကိုယ်စားပြုသို့ elaborated ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ postulated ဖြစ်ပါတယ် (တှငျဆှေးနှေးအတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံပြီး Rescorla, 1991.)
ထိုသို့သောသင်ယူမှုသည်အစပိုင်းတွင် stochastic ဖြစ်စဉ်များမှထုတ်ပေးသောအပြုအမူများကိုရွေးချယ်စေသည့်စနစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ လုပ်ရပ်များ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တန်ဖိုးကိုထိုအပြုအမူများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆားကစ်များတွင် synaptic ပြောင်းလဲမှုများ (အာရုံကြောဆိုင်ရာ“ တန်ဖိုးစနစ်များ”) ကိုပြသရမည်။ [Friston et al ။ , 1994]) ။ အာရုံကြောကွန်ယက်သီအိုရီနှင့်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်လ်အားဖြည့်သင်ယူမှု၏ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းကြပါပြီ။ အတုအားဖြည့်သင်ကြားခြင်းစနစ် (RL) စနစ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အပြုအမူများကိုအချိန်နှင့်အမျှအားဖြည့်ခြင်းများကိုတိုးမြှင့်စေရန်ရည်ရွယ်သည် Barto 1995 နှင့် Sutton နှင့် Barto 1981။ RL မော်ဒယ်များသည်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်မှီခိုနေသည့်တုံ့ပြန်ချက်ကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်ပြီးသင်ယူသူအားအပြုအမူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤသို့သောစနစ်သည်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအကျိုးဆက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဘာတိုကမှတ်ချက်ချသည်။ ၎င်းကို“ ယာယီအကြွေးပေးအပ်ခြင်းပြproblemနာ” ဟုခေါ်သည်။ အာရုံကြောကွန်ယက်အတွင်းရှိ“ သရုပ်ဆောင်ဝေဖန်သူ” ဗိသုကာဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာတွင်“ ဝေဖန်သူ” (အခြေအနေနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုအခြေအနေကိုရရှိနိုင်သော) သည်“ သရုပ်ဆောင်” အားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်မင်းသားအားအလေးချိန်သတ်မှတ်သည် ချက်ချင်းရှေ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ။ ဒီအယူအဆနဲ့အနီးကပ်ဆက်စပ်အားဖြည့်သင်ယူမှု၏ယာယီ - ခြားနားချက် algorithm ကိုအလုပ်သမားသင်္ချာမော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည် (Sutton နှင့် Barto, 1998)။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူနေစဉ်အတွင်း dopaminergic အာရုံခံများ၏အပြုအမူအတွက်အကောင့်မှအဆိုပြုထားသောဤမော်ဒယ်အတွက် Schultz 2002 နှင့် Schultz et al ။ 1997, သင်ယူမှုမူလတန်းအားဖြည့်၏ခန့်မှန်းရခက်၏ဒီဂရီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကွန်ယက်များသည်“ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အမှား” ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်အားသွင်းစက်၏အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်၎င်း၏ခန့်မှန်းချက်အကြားခြားနားချက်ကိုအခြေခံသည်။ အဖြစ်အပျက်ကိုလုံးဝကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပြီးအမှားဝတ္ထုသည်သုညဖြစ်သည့်အခါတွင်လည်းသင်ယူမှုမရှိတော့ပါ။ ဒီပုံစံကို Pavlovian ရော၊ (Schultz နှင့် Dickinson, 2000)။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌၊ အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ခန့်မှန်းရခက်သည့်ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာအားဖြင့်ကျပန်းလီဗာနှင့်မမျှော်လင့်သောအစားအစာလုံးလေး) နှင့်စပ်လျဉ်း။ အကဲဖြတ်ရသည်။ ထို့နောက်ခန့်မှန်းမှုအမှားအားတွက်ချက်သည်၊ အားဖြည့်ခြင်းသင်ကြားမှုနှင့်ကိုက်ညီသောကွန်ယက်တစ်ခုသည်ဟေဗြဲဘာသာစကားသင်ယူမှုယန္တရားကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့် synapses များကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင် pre- နှင့် postynaptic လုပ်ဆောင်မှုများသည်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ရေရှည်ပြောင်းလဲမှုများကိုလွှမ်းမိုးရန်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အများအပြားကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များ corticostriatal ကွန်ယက်အတွင်း embedded ပြုပြင်မွမ်းမံ synapses များအတွက်အခြေခံအဖြစ်, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံ, postynaptic ကယ်လစီယမ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် dopamine signal ကို၏တိကျသောအချိန်ကိုက် striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံဖို့ glutamatergic presynaptic input ကိုထည့်သွင်းပါပြီ Kotter ၁၉၉၄, Pennartz 1997 နှင့် Wickens နှင့်Kötter 1995.
Corticostriatal ကွန်ယက်များသည်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်မော်တာမော်လီကျူးလေ့လာမှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်မော်တာသင်ယူမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အမှန်မှာ၊ prefrontal cortex, striatum, amygdala နှင့် dorsal နှင့် ventral striatum ပါ ၀ င်သောစနစ်များသည်စနစ်တကျသင်ကြားမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟူသောသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိသည်။ ဤဒေသများရှိ glutamate နှင့် dopamine-mediated အချက်ပြမှုများသည်မော်တာလေ့လာမှုအသစ်အတွက်လိုအပ်သောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောပုံစံတွင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောတိရိစ္ဆာန်များသည် sucrose pellets များရရှိရန်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း lever-press အလုပ်ကိုလုပ်ရမည် Andrzejewski et al ။ 2004 နှင့် Pratt နှင့်ကယ်လီ 2004။ ကျွန်ုပ်တို့အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များသည် operant chamber တစ်ခုတွင်ပြင်းထန်သောစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်သောအချိန်တွင်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည် (ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအသုံးပြုနေသောဤဗားရှင်းတွင်၊ ဤအခန်းတွင်ကျပန်း၊ မမျှော်လင့်သော sucrose pellets နှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်) တင်ပြ) ။ ဤကာလအတောအတွင်းကြွက်သည်၎င်း၏ချို့တဲ့မှုအခြေအနေနှင့်ရံဖန်ရံခါဆုလာဘ်၏သက်ရောက်မှုဆိုးကျိုးများကြောင့်ကြွက်သည်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မော်တာအားဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည် (sniffs, rears, ambulates, nose-pokes, effect,“ forages”) ။ ကျပန်းလီဗာ - စာနယ်ဇင်းဆုပေးပွဲတင်ဆက်မှုအတွက်ရလဒ်များ; ဒီကျပန်းတွဲဖက်မှုအတော်များများပြီးနောက်, ကြွက်လီဗာ - စာနယ်ဇင်းပြန်လုပ်ပါ။ ကြွက်တစ်ကောင်အတွက်မူအရေးပေါ်ကိုယ်စားပြုမှုသည်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော်လည်း (၎င်းသည်လေ့ကျင့်မှုရက်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်သော်လည်း), အပြုအမူ၏မြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုအတော်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းရရှိသည်; ရက်ပေါင်းများစွာကြာလျှင်၊ တိရိစ္ဆာန်သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးအလွန်မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်ဖိအားပေးသည် ပုံ 7).
ပုံ7။ ဆာပတုံ့ပြန်မှုများ၏သိမ်းယူမှုအပေါ် NMDA Receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိရိယာတန်ဆာပလာများသင်ယူခြင်း (ဆာလောင်နေသောကြွက်များတွင်အစားအစာများကိုဖိအားပေးရန်) သည်ပါဝါလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့်ကောင်းစွာဖော်ပြထားသောစနစ်တကျပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ နျူကလိယထဲသို့ထည့်သွင်းထားသော NMDA ရန်သူ AP-5 သည်လေ့လာမှုကိုလက်ယာဘက်သို့ရွှေ့လိုက်သည်။ ဇယားသည်ကြွက်နှစ်ကောင်အတွက်စုပေါင်းမိနစ်များအတွင်း (ဆားငန်ဆေး၊ အပြာစက်ဝိုင်း၊ AP-5၊ အနီရောင်စက်ဝိုင်း) အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသည်။ ကြွက်များ၏အချက်အလက်နှင့်ပါဝါလည်ပတ်မှုများသည်ယေဘူယျပုံစံ y = ax ကိုအသုံးပြုသည်b) ။ Best-fit လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအစိုင်အခဲလိုင်းများဖြင့်ရေးဆွဲထားပြီးသက်ဆိုင်ရာကှဲလှဲမှုတစ်ခုစီ၏ကွေးဘေးတွင်ပြသထားသည်။ အခြားတိုးတက်မှုများ၊ ထပ်ဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့် quadratic တို့ကဲ့သို့သောအချက်အလက်များသည်အချက်အလက်နှင့်လည်းကိုက်ညီသော်လည်းကွဲလွဲမှုနည်းပါးသည်။ (အမ် Andrzejewski မှ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးမှ။ )
ဤလေ့လာမှုကာလအတွင်းမျိုးရိုးဗီဇ accumbens core, basolateral amygdala နှင့် medial prefrontal cortex အပါအ ၀ င် corticolimbic sites အချို့သို့ရွေးချယ်သော NMDA antagonist AP-5 ကိုပြန့်ပွားခြင်းကကြွက်များ၏တုန့်ပြန်မှုရလဒ်ရလဒ်ကိုလေ့လာခြင်း ကယ်လီ 2004b နှင့် Kelley et al ။ 2003။ မှတ်သားစရာမှာ၊ ထိုကြွက်များတူညီသောထိုးနှက်ချက်သည်သူတို့လုပ်ငန်းကိုလေ့လာပြီးသည်နှင့် (မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုမပါဘဲလေ့ကျင့်သင်ကြားသည့်အခါသူတို့အားလုံးလုပ်လေ့ရှိသည်) သည်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ (နေရာအများစုတွင်) ။ Spatial အပြုအမူနှင့် aversive သင်ယူမှုကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွင်း glutamate အဲဒီ receptor activation ပါဝင်သည် de Leonibus et al ။ 2003, Roullet et al ။ ၂၀၀၁ နှင့် Smith-Roe et al ။ 1999။ ဆာပသောအပြုအမူများကိုရယူခြင်းသည် DA D-1 receptor activation အပေါ်မှီခိုနေပြီးနောက်ထပ်အချက်အလက်များအရ D-1 နှင့် NMDA receptor activation ကို accumbens core၊ prefrontal cortex နှင့်အခြားဒေသများတွင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဟုအကြံပြုသည် Baldwin et al ။ 2002b နှင့် Smith-Roe နှင့် Kelley 2000။ AMPA နှင့် muscarinic receptor function ကိုနှောင့်ယှက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ရှုပ်ထွေးသောအချက်ပြမှုသည်ပလပ်စတစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းအကြံပြုခြင်းဖြင့်သင်ယူခြင်းကိုနှောင့်ယှက်စေသည် (PJ Hernandez et al ။ တင်သွင်း; Pratt and Kelley, 2004a) ။ intracellular အချက်ပြနှင့်ပတ်သက်။ မကြာသေးမီကဒေတာကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွက် PKA နှင့် de novo ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်များအတွက်အခန်းကဏ္ suggest အကြံပြု Baldwin et al ။ 2002a နှင့် ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ 2002။ ဒါဟာမော်တာ cortex အတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်၏ပိတ်ဆို့ခြင်းအရေးပေါ်သင်ယူမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အစည်းအဝေးများကျော်ဆာပမော်တာကျွမ်းကျင်မှု၏တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေ (Luft et al ။ , 2004)။ dopamine နှင့် glutamate စနစ်များ၏ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်ဤ forebrain ဒေသအမျိုးမျိုးတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့် amygdala သည် hippocampus သို့မဟုတ် accumbens coreများထက်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖွယ်ရှိသည်) သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်အကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆုချီးမြှင့်နှင့်ဆက်စပ်သောမှလာသည်ဟု Pavlovian အခြေအနေတွင်အချက်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ထိန်းညှိအတွက်အစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည် Corbit et al ။ ၂၀၀၁, Dayan နှင့် Balleine 2002 နှင့် Dickinson နှင့် Balleine 1994။ နျူကလိယအတွက် NMDA အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ core ကို Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏ဝယ်ယူတားဆီး (Di Ciano et al ။ , 2001)အဓိကအချက်များချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒီဒေသမှာ NMDA အဲဒီ receptor activation လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာထိုလေ့လာမှုတွင် DA ရန်သူသည်ချဉ်းကပ်မှုသင်ယူခြင်းကိုပြင်းထန်စွာအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ပြီး AMPA ၏ရန်သူသည်လေ့လာသင်ယူမှုတုံ့ပြန်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ accumbens အတွင်းတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် dopamine လျော့နည်းသွားလည်းသင်ယူချဉ်းကပ်အပြုအမူဖျက်သိမ်း ပါကင်ဆန် et al ။ 1999 နှင့် ပါကင်ဆန် et al ။ 2002။ ဤလုပ်ငန်းကအစောပိုင်းနှိုးဆွမှု - လှုံ့ဆော်မှု (Pavlovian) အသင်းအဖွဲ့များသည်အနာဂတ်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များသို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သည့်ဆာပတုန့်ပြန်မှုများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းနှင့်ဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် amygdalo-accumbens လမ်းကြောင်းတွင် DA နှင့်အချိုမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည် (Cardinal et al ။ , 2002).
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း operant အခန်းရှိအပြုအမူ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလည်း glutamate သို့မဟုတ် dopamine ရန်ကနေသွေးဆောင်သင်ယူမှုအတွက်ပြတ်တောက်အခြေခံအပြုအမူယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပါသည် (PJ Hernandez et al, တင်သွင်း။ PJ Hernandez et al, 2003, Soc ။ Neurosci ။ , စိတ္တဇ, Volume ကို 29) ။ ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ယူစဉ်ကလီဗာကိုဖိအားတိုင်းတာခြင်းအပြင်အစားအစာဗန်းထဲ၌နှာခေါင်းပေါက်များကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အစားအစာကိုအမှန်တကယ်ရရှိရန်လိုအပ်သောခြွင်းချက်မရှိသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဖြေများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်း၏ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ရပ်များ၏အမိန့်နှင့်ယာယီဆက်စပ်မှုကိုတံဆိပ်ခတ်စေသောကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (နှာခေါင်းပေါက်၊ လီဗာနှိပ်ခြင်း၊ ဆုချခြင်းများ) ။ ကတည်းက (ပိုမိုမကြာသေးမီကစမ်းသပ်ချက်များတွင်ဥပမာ, Pratt နှင့်ကယ်လီ, 2004) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတာ ၀ န်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ဤပထမ ၂ ရက်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များအားလုံးသည်“ အခမဲ့” ကျပန်းသယ်ဆောင်သည့်လုံးလေးများရရှိကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်အများစုသည်စာနယ်ဇင်းကိုမလေ့လာသေးသောကြောင့်ဤသင်ခန်းစာများသည်ဆုလာဘ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ယာယီဖွဲ့စည်းပုံကိုတိုင်းတာရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းဆာပသင်ယူမှုမတိုင်မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်း။ အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 8AP-5 ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိတိရိစ္ဆာန်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြားအားဖြည့်သိပ်သည်းဆကိုညီမျှသည့်အချိန်တွင်ပင်နှာခေါင်းပေါက်များကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အားဖြည့်ပေးပို့ခြင်းနှင့်နှာခေါင်းပေါင်များအကြားကြာချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးအပြင်အားဖြည့်ပေးသောကြောင့်နှာခေါင်းပေါက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုင်းတာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသော NMDA receptor blockad နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အပြုအမူအားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများတွေ့ရှိရသည်။ ဤကြွက်များတွင်လုံးလေးများကိုထုတ်ယူရန်သုံးလနီးပါးနီးပါးကြာမြင့်ပြီးအားဖြည့်ပေးသည့်အခါနှာခေါင်းပေါက်လျှင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့၏အခွားလေ့လာမှုမြားသညျနားထောငျခကျြမြားနှငျ့အစာစားသုံးခွငျးသို့မဟုတျအစာစားခွငျး၏အသှငျအပွငျမြား၏အထွေထွေမော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ Kelley et al ။ 1997 နှင့် Smith-Roe et al ။ 1999နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ကုသသောကြွက်များသည်၎င်းတို့ကိုတွေ့ရှိသည်နှင့်အမြဲတမ်းလုံးလုံးတောင့်ကိုစားသုံးကြသည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်မှု (သို့) မော်တာချို့ယွင်းမှုသည်ဤပရိုဖိုင်းကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ DA D-1 ၏ရန်သူသည်နှာခေါင်းပေါက်များကိုလျှော့ချသော်လည်းဒီဂရီအနည်းဆုံးအထိလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး latency (သို့) ဖြစ်နိုင်ခြေများအပေါ်တွင်သြဇာသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ဒီပရိုဖိုင်းက accumbens အတွင်းရှိ NMDA receptors အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသော glutamate အချက်ပြမှုသည်တုံ့ပြန်မှုကို foraging ၏ output နှင့် speed ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်အရေးပါလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည် အချို့သောစိတ်ခွန်အားနိုးခြင်းနှင့်နောက်ခံအခြေအနေများအောက်မှာ။ ဤတုံ့ပြန်မှု၏ရလဒ်သည်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမြင့်တက်လာသောအခါဆုလာဘ်အတွက်ကျပန်းလီဗာပုံနှိပ်ခြင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အလားအလာမှာပိုမိုမြင့်မားသည်။ AP-5 ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ကြွက်များသည်နှိုးဆွစေသောအစားအစာလုံးလေးများကိုတင်ပြသော်လည်းကြွက်များကိုဖိခြင်းသို့မဟုတ်နှာခေါင်းထိုးခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားမှုနည်းပါးပုံရသည်။ တိကျသောယန္တရားများမှာမရှင်းလင်းသေးသော်လည်း AP-5 သည်ဆုများပေးအပ်ခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်၏လုပ်ရပ်များအကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တားဆီးထားသည်။ ဒါဟာ striatal spiny အာရုံခံဆဲလ်တုံ့ပြန်မှု foraging ၏အရေးပါသောအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ် - တုန့်ပြန်တွဲဖက်မှုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် NMDA-mediated တက်ပြည်နယ်သို့ပြောင်းလဲရမယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ DA (မျှော်လင့်မထားသည့်ဆုလာဘ်တစ်ခုစီနှင့်အတူဖြန့်ချိလာသည့်) DA သည်ဤအစောပိုင်းဝယ်ယူမှုကာလတွင်လည်းပါဝင်သည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအပြင် Wickens နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအီလက်ထရောနစ် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းအတွက်လီဗာ၏ဖိအားပေးတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိခြင်းသည် cortocostriatal synapses ၏ DA stimulation-induced potentiation နှင့်အနီးကပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားသည်ဆုလာဘ်၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုအဆိုပြုထားသည်။ အခြေအနေ - မှီခိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များ၏ဘက်လိုက်မှု Reynolds က et al ။ ၂၀၀၁ နှင့် Wickens et al ။ 2003.
ပုံ 8 ။ နျူကလိယလေ့လာခြင်းဖြစ်စဉ်များသည် Nucleus Accumbens Core အတွင်းရှိ NMDA Receptor Activation အပေါ်မူတည်သည်သရုပ်ပြလေ့ကျင့်မှု၏ပထမ ၄ ရက်သည်ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော NMDA ရန်သူ AP-4 အားဖြင့်ကုသမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသည် (နှစ်ဖက်သဘောအရ5nmol) သည်ကိရိယာတန်ဆာပလာများလေ့လာခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးဤအစောပိုင်းအစည်းအဝေးများ (ခ) တွင်နှာခေါင်းပေါက်စများ၏ရေနံပမာဏကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။ သင်ခန်းစာ ၁ နှင့် ၂ တွင်ကျပန်းပေးပို့သောအစားအစာလုံးလေးများကိုကြွက်များအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ (ဂ) နောက်ဆုံးအားသွင်းထားသောအဖြစ်အပျက်သည်အားဖြည့်ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသသောတိရိစ္ဆာန်များသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုတည့်မတ်ပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်တွေ့သောအခါတခါလုံးလုံးသည်အစာစားကြသည် (PJ Hernandez et al ။ , 5, Soc ။ Neurosci ။ , abstract, Volume) 29) ။ (အထက်) ဦး နှောက်ကဏ္earlyများသည်အစောပိုင်းလေ့လာမှုကာလအတွင်း (ပျှမ်းမျှလီဗာ ၅၀ မှ ၁၀၀) သို့မဟုတ်အစားအစာချို့တဲ့သောအိမ်လှောင်အိမ်ထိန်းချုပ်မှုတွင်တိရိစ္ဆာန်များမှ ဦး နှောက်ကိုတုန့်ပြန်မှုမျိုးဗီဇကိုဖော်ပြရန်အတွက် in situ hybridization စမ်းသပ်မှုမှ ဦး နှောက်ကဏ္sectionsများ။ ကျယ်ပြန့် corticolimbic ဒေသများရှိမြင့်မားသောစကားရပ်သတိပြုပါ စက်ဝိုင်း, မင်္ဂလာပါနှင့် zif268စာသားထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း (PJ ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2004, Soc ။ Neurosci ။ , စိတ္တဇ, Volume ကို 30).
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများသည်မကြာသေးမီကအကျိုးကျေးဇူးများကိုစောစီးစွာတုန့်ပြန်သောမျိုးဗီဇသို့မဟုတ် postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်းများအနေဖြင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်ပါ ၀ င်မည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကယ်လီနှင့် Deadwyler ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည် စက်ဝိုင်း ငါတို့ကဲ့သို့ဆင်တူသောလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဝယ်ယူစဉ် corticolimbic ကွန်ယက်များတွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန် upregulated ဖြစ်ပါတယ် ကယ်လီနှင့် Deadwyler 2002 နှင့် ကယ်လီနှင့် Deadwyler 2003, ငါတို့သည်လည်းထိုအမှုကိုတွေ့ စက်ဝိုင်း, မင်္ဂလာပါနှင့် zif26 (NGFI-A) စာသင်ကြားရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင် cortical နှင့် striatal sites များတွင် upregulated နေကြသည် (PJ Hernandez et al ။ , 2004, Soc ။ Neurosci ။ , စိတ္တဇ, Volume ကို 30) (ပြထားတဲ့အချက်အလက်များ၏ဥပမာ ပုံ 8) ။ နီးကပ်စွာဆက်စပ်သောလေ့လာမှုအမျိုးအစားများအတွက်အထောက်အကူပြုသောသက်သေအထောက်အထားများကို Everitt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကသက်သေပြသည် zif268 စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက် corticolimbic- striatal ကွန်ယက်၌တည်၏ Hall et al ။ ၂၀၀၁, သောမတ်စ် et al ။ 2002 နှင့် သောမတ်စ် et al ။ 2003။ တွက်ချက်မှုအရအံ့အားသင့်စရာ၊ အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်များသည်သင်ယူမှုအသစ်အတွက်အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်း နှင့် မင်္ဂလာပါ ဝတ္ထုအသစ်တစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ပြီးနောက် Hippocampus နှင့် cortical networks များ၌ပြင်းထန်စွာအဆင့်မြှင့်ထားခြင်းခံရသည် (Vazdarjanova et al ။ , 2002)အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဗီဇများကိုအဘယ်ကြောင့်တွေ့ရှိရကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်၊ တိရိစ္ဆာန်များတွင်ပင်ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအစားအစာတောင့်တင်းသည့်တင်ဆက်မှုကိုကြုံတွေ့ရပြီးပြင်းထန်သောရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါဝင်နေကြသည်။ ဤအမျိုးဗီဇအများစု၏လှုပ်ရှားမှု - သွေးဆောင်စကားရပ် NMDA activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပြခဲ့ပြီးကတည်းက Sato et al ။ 2001, ဘဏ္ewာစိုးနှင့် Worley 2001b နှင့် ဝမ် et al ။ 1994ဤတွေ့ရှိချက်များကအခြားလေ့လာမှုအမျိုးအစားများနည်းတူမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဦး နှောက်ဒေသများစွာရှိလှုပ်ရှားမှု - မှီခိုအားထားရသောအစောပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်လိုအပ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့် Synaptic နှင့် network modifications များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Dopamine- နှင့်အချိုမှုအစပြုပလပ်စတစ် - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စွဲလမ်းမှု
အထက်ပါအကောင့်ကအကြံပြုသည်မှာ corticolimbic-striatal networks များအတွင်း၌ glutamate-dopamine interaction နှင့် interacellular နှင့် molecular အကျိုးဆက်များသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုအခြေခံသောသင်ယူမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဤယူဆချက်ကိုထောက်ခံရန်အတွက်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသက်သေအထောက်အထားများစွာရရှိခဲ့သည်။ ဤအယူအဆသည်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ပုံမှန်အားဖြည့်သင်ကြားရေးတွင်အရေးကြီးသောဤအရာများနှင့်ဤအရာဝတ္ထုသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုတည်ထောင်ရန်အဓိကကျသည့်လမ်းကြောင်းများ၊ လေ့လာမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒနှင့်စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒနှစ်ခုသည်နယ်ပယ်တစ်ခုစီမှတိုးတက်မှုများမှတစ်ဆင့်အခြားအကြောင်းကြားမှုများမှများစွာအကျိုးရရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဤအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူစွဲလမ်းမှုအပေါ်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ Berke နှင့် Hyman 2000, Cardinal နှင့် Everitt 2004, di Chiara 1998, Hyman နှင့် Malenka 2001 နှင့် White က 1996) ။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့်၊ မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဥပမာများကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဤစာတမ်းအစောပိုင်းတွင်အဆိုပြုထားသောအတွေးအခေါ်အချို့နှင့်ချိတ်ဆက်လိုသည်။
အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် glutamate နှင့် dopamine အချက်ပြမှုများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟူသောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရှိသည်။ ဒီအာရုံအများစုသည်နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex နှင့် ventral tegmental ,ရိယာ, စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုအဓိကဒေသများ, amygdala နှင့် hippocampus ကဲ့သို့ကောင်းစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ပေမယ့်အပေါ်ခဲ့ Everitt et al ။ 1999 နှင့် Vorel et al ။ ၂၀၀၁။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည် dopaminergic နှင့် glutamatergic synapses များနှင့်ဆက်စပ်သည့် synaptic protein ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေကြောင်းပြသသည့်လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။ သာအနည်းငယ်ဥပမာကိုဒီမှာပေးလိမ့်မည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ G ပရိုတိန်း -mediated အချက်ပြအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကွိုးစားနှင့်ဤလမ်းအတွက်အများအပြား extracellular လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုကောင်းစွာထူထောင်သည် (Hyman, ၁၉၉၆)။ Bowers et al မကြာသေးမီကလေ့လာမှု။ နာတာရှည်ကိုကာကိုလာကုသမှုရပ်စဲပြီးနောက် G ပရိုတိန်းအချက်ပြ, AGS3 တစ်ခု activator, prefrontal cortex နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ upregulated ကြောင်းပြသ (Bowers et al ။ , 2004)။ မှတ်သားစရာမှာကိုကင်းကုသမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက်ဤပြောင်းလဲမှုများသည် prefrontal cortex တွင် ၂ လအထိကြာခဲ့သည်။ AGS2 မှ antisense သည် PFC အတွင်းသို့ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားကိုကင်း - priming-induced reinstatement ကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အပို G-protein ပရိုတင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး RGS တွင်လည်းကိုကင်းအတွက်ပြသခဲ့သည် ဆရာတော် et al ။ 2002 နှင့် Rahman et al ။ 2003။ ဤလေ့လာမှုများကအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အစောပိုင်းအဆင့်များအတွင်း၌ဆဲလ်အချက်ပြခြင်း (သို့) မြစ်အောက်ပိုင်းဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာကက်စကိတ်များ၏“ တံခါးစောင့်များ” တွင်မော်လီကျူးများကိုပြောင်းလဲပစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏အခြားတာရှည်ခံသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းရှိ CdK5 ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည် Bibb et al ။ 2001 နှင့် Nestler et al ။ 1999။ ထို့အပြင်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သော Homer1 ပရိုတိန်းများသည် plasticity ၏ postynaptic သိပ်သည်းမှုရှုပ်ထွေးမှုအတွက်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ (Ghasemzadeh et al ။ , 2003)။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆမှာဟိုင်မာပရိုတင်းများသည် G ပရိုတိန်းနှင့်တွဲဖက်သော receptor များသို့ calcium အချက်ပြ၏ပြင်းအားကိုညှိရန်နှင့် Ca ၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းညှိရန်ဖြစ်သည်။2+ RGS ပရိုတိန်းမှတဆင့်လှို (Shin et al ။ , 2003)။ ထပ်မံ၍ ကြမ်းတမ်းသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ PSD-95 သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအဖျက်စွမ်းအားမြင့်ပရိုတင်းဖြစ်သည့်ကြွက်များတွင်ကြာရှည်စွာကုသသောကြွက်များတွင်ကိုကင်းနှင့်ကုသမှုရပ်တန့်ပြီးနောက် ၂ လအလိုတွင်ပင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျဆင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Yao et al ။ , 2004)။ ဤကြွက်များတွင် prefrontal-accumbens glutamatergic synapses တွင် synaptic plasticity (LTP) သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး PSD-95 ၏စွဲမြဲကျဆင်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုသည်စွဲလမ်းမှု၌ကြာရှည်တည်တံ့သောပြောင်းလဲမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့မှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ပင်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မှာထူးခြားသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုတည်းနှင့်ကိုကင်း၊ အမ်ဖီတမင်း၊ နီကိုတင်း၊ မော်ဖင်းသို့မဟုတ်အီသနော (စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုတည်းနှင့်ထိတွေ့မှု) သည် dopamine ဆဲလ်များ၌ AMPA ရေစီးကြောင်းများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Saal et al ။ 2003 နှင့် Ungless et al ။ ၂၀၀၁ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအီသနောထိတွေ့တ ဦး တည်းအောက်ပါ, VTA အတွက် GABAergic synapses မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်နေစဉ် (Melis et al ။ , 2002)။ Accumbens နှင့် hippocampal synaptic plasticity သည် THC နှင့်ထိတွေ့မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည် (Mato et al ။ , 2004)။ အတူတကွယူ, လေ့လာမှုဒီအုပ်စု (သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားပြု) များစွာသောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဒေသများရှိ postsynaptic သိပ်သည်းဆအတွင်းအချက်ပြပရိုတိန်းအများအပြားရှည်လျားသော (သို့မဟုတ်စူးရှသော) ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ, ရေရှည်ထုံးစံ၌ပြောင်းလဲနေကြသည်အကြံပြုထားသည် မူးယစ်ဆေးဝါးမှ။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤပရိုတိန်းများစွာကို synaptic နှင့် memory memory နှစ်ခုစလုံးအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုတည်ထောင်ထားသည်။
ဦး နှောက်နယ်ပယ်များ၌သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်အရေးကြီးသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်ကိုပြောင်းလဲသွားကြောင်းသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အခြေအနေများသို့မဟုတ်အခြေအနေများ (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုလုံး) တွင်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ထပ်ခါတလဲလဲမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုအပေါ်တုန့်ပြန်သောအားဖြင့်အသစ်သောသင်ယူမှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကသီအိုရီအရလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်စနစ်များသည်“ ရောဂါဗေဒဆုတ်ယုတ်ခြင်း” ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤပြောင်းလဲမှုသည်ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အလေ့အထများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည် (Everitt et al ။ , 2001) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်များကိုပုံမှန်မဟုတ်သောအထိခိုက်မခံခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်အလွန်အကျွံစွပ်စွဲခံရသည့်ထူးခြားမှုသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ရော်ဘင်ဆင်နှင့် Berridge, 2001)။ စွဲလမ်းမှု၏အကြောင်းအရင်းသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းချက်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း (သို့) မူးယစ်ဆေးဝါးအေးစက်သည့်ပုံစံများကိုအသုံးပြုထားသောမကြာသေးမီကအချက်အလက်များသည်ဤယေဘူယျယူဆချက်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖယ်ရှား။ တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်တုန့်ပြန်မှုကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ အားဖြည့် (Shaham et al ။ , 2003)။ ဤသည်ပါရာဒိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှောင်ကြဉ်သည့်ကာလအပြီး relapse မော်ဒယ်အဆိုပြုထားသည်။ နျူကလိယအတွင်းအချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူများအတွင်းတိုးများလာခြင်းနှင့်ဤဒေသတွင်းသို့ထိုးသွင်းစေသောအချိုမှုန်ဆန့်ကျင်သူများသည်ကိုကင်းဆေးရည်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းကိုပိတ်ပင် (Cornish နှင့် Kalivas, 2000)။ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေစဉ်အတွင်း accacens extracellular glutamate တိုးပွားလာခြင်း၏အနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာ prefrontal cortex ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ (McFarland et al ။ , 2003)။ ထို့အပြင်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိမ်မွေ့မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ accumbens core တွင်အချိုမှုမြင့်မားသောအချိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Pierce et al ။ , 1996)။ ကိုကင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကိုကင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်ပေါ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ (နျူကလိယမလှုံ့ဆော်မှုများမဟုတ်ပါ) သည်နျူကလိယတွင်အချိုမှုနှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Hotsenpiller et al ။ , 2001)။ dopamine နှင့်အထူးသဖြင့် D-1 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ also ကိုလည်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုတင်ပြခြင်းသည်တုန့်ပြန်မှုအားရပ်တန့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များတွင် (မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း) တုန့်ပြန်မှုအားပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို D-1 အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုသည် Alleweireldt et al ။ 2002, Ciccocioppo et al ။ 2001 နှင့် Khroyan et al ။ 2003။ အဆိုပါ accumbens shell ကိုသို့မဟုတ် basolateral amygdala သို့ရန်ဘက်ပြုသောသူများ၏ကျူးကျော်ကိုကင်းရှာကြံလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်း Anderson က et al ။ 2003 နှင့် et al ။ ၂၀၀၁နှင့်မကြာမီကမကြာသေးမီကလေ့လာမှုကြမ်းတမ်းပြသသည်မူးယစ်ဆေး - ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှာကြံကိုကင်းများအတွက် basolateral amygdala နှင့် AMPA receptors အတွင်း DA receptors ၏တစ်ပြိုင်နက် activation လိုအပ်ကြောင်းပြသ (Di Ciano နှင့် Everitt၊ ၂၀၀၄)။ 100 ms ကြားကာလ၌ DA လွှတ်ပေးမှုကိုနမူနာယူနိုင်သည့်အသစ်သောမြန်ဆန်စွာ scan လုပ်သည့် cyclic voltammetry နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ မကြာသေးမီကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအချက်အလက်များသည်ကိုကင်းရှာဖွေစဉ်ကာလအတွင်း dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပြသသည်။ ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များသည်ကိုကင်းဖြန့်ဝေမှုနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်အပြင်ဘက်ဆဲလ် DA တွင်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ (Phillips et al ။ , 2003)။ ဤအုပ်စုသည်သဘာဝဆုလာဘ် (sucrose) ရှာဖွေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ subsecond dopamine ဖြန့်ချိမှု၏အလားတူပရိုဖိုင်းကိုပြသခဲ့သည်။ sucrose- ဆက်စပ်တွေကိုလည်းလျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ (Roitman et al ။ , 2004)။ ဤလေ့လာမှုများကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများအခြေခံပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများအကြားထပ်တူတူညီမှုများအကြံပြုထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်သည့်ပုံစံများဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်သူများ၏နာတာရှည်ထိတွေ့မှုကကြွက်များအားမူးယစ်ဆေးဝါးထိုးဆေးသုံးစွဲရန်စိတ်အားထက်သန်စေကြောင်းပြသသည် (Vezina et al ။ , 2002), ရေရှည်မော်လီကျူးနှင့်ဆယ်လူလာပြောင်းလဲမှုအမှန်ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် (အချို့ကိစ္စများတွင်) သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုလှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းအကြံပြု (Fiorino နှင့် Phillips, 1999).
အထက်ပါဆွေးနွေးမှုသည်များသောအားဖြင့် stimulants များနှင့်သာဓကများကိုအာရုံစိုက်ထားသော်လည်းအရက်၊ နီကိုတင်းနှင့် opioids ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာဆေးဝါးများသည် DA နှင့် glutamatergic စနစ်များအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆယ်လူလာသက်ရောက်မှုများရှိသည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အချိုမှုန့်နှင့် dopamine စနစ်နှစ်ခုလုံးသည်နီကိုတင်း၏ပြင်းထန်သောနှင့်ရေရှည်သက်ရောက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းအထောက်အထားရှိသည် Dani et al ။ ၂၀၀၁, Kenny et al ။ 2003, Mansvelder နှင့် McGehee 2000 နှင့် Pontieri et al ။ ၁၉၉၆ နှင့်အရက် Brancucci et al ။ 2004, Koob et al ။ 1998, မေတ္တာရှင် et al ။ 2003 နှင့် Maldve et al ။ 2002.
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအေးစက်သည့်ပုံစံများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအေးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်သော Pavlovian အေးစက်မှုဖြစ်စဉ်များ၏အာရုံကြောအခြေခံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ဤနယ်ပယ်သည်အစောပိုင်းလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်အခြေအနေများအားပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပုံရသည် O'Brien et al ။ ၂၀၀၆ နှင့် Wikler ၁၉၇၃။ ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အားကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည် (Stewart et al ။ , 1984)။ အမှန်စင်စစ် opioid နှင့်ကိုကင်းစွဲသူများပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှသုတေသနပြုချက်အရဇီဝကမ္မနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကဖော်ထုတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အချက်များ (ဘိန်းဖြူဆေးကြောခြင်း၊ “ ထမင်းချက်ပြုတ်သည့်ထုံးတမ်းများ၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း” ၏ဗီဒီယို) သည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်စိတ်စွဲလမ်းမှုစသည်တို့ကဲ့သို့အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရှိရ Childress et al ။ 1986 နှင့် Sideroff နှင့် Jarvik 1980။ အခြေအနေဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုနီကိုတင်းနှင့်အရက်မှီခိုမှုတို့ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည် Kaplan et al ။ 1985, Ludwig et al ။ 1974 နှင့် Droungas et al ။ 1995။ ပိုမိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အခါ neuroimaging လေ့လာမှုများသည်သိသာသော ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအများစုအနေဖြင့် prefrontal cortex နှင့်ဆက်စပ်သော circuit များကဲ့သို့ amygdala (ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုကြည့် စတိန်းနှင့် Volkow 2002, Jentsch နှင့်တေလာ 1999 နှင့် London et al ။ 2000) ။ ဥပမာအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သော MRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်သူများရှိကိုကင်းများအားထိတွေ့မှုသည် amygdala နှင့် prefrontal cortical ဒေသများ၏တွန်းအားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုအစီရင်ခံသည် (Bonson et al ။ , 2002) ဒေသတွင်း ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုအသုံးပြုပြီးအလားတူလေ့လာမှုက amygdala နှင့် cingulate cortex လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည် Childress et al ။ 1999 နှင့် Kilts et al ။ 2001။ ထိုသို့သောလေ့လာမှုများသည်လူသားများတွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်စဉ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုသောဆန္ဒများကိုထင်ဟပ်စေသောတိကျသောစိတ်ခွန်အားနိုးမှုအခြေအနေများကိုလှုံ့ဆော်မှု - သွေးဆောင်ခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
မကြာသေးမီကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ အလုပ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်နွယ်မှုများသည်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအတွက်အရေးကြီးသော ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောင်းလဲပစ်သည်ဟူသောမေးခွန်းကိုလည်းဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ရော်ဘင်ဆင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိခိုက်လွယ်မှု၏အမူအကျင့်နှင့်မော်လီကျူးညွှန်းကိန်းများအပေါ်ပတ် ၀ န်းကျင်အသစ်နှင့်ဆက်စပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည် Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင် 1996, Badiani et al ။ 1997 နှင့် Badiani et al ။ 1998။ ဤအုပ်စုသည်မကြာသေးမီကပြသခဲ့သည်မှာအမ်ဖီတမင်းဆေးကိုပြသည် စက်ဝိုင်း အိမ်လှောင်အိမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သာ။ ကြီးမြတ်ဒီဂရီမှ striatum နှင့် prefrontal cortex အတွက်စကားရပ် (Klebaur et al ။ , 2002)။ ပလပ်စတစ်နှင့် postynaptic သိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်။ အစောပိုင်းကဆွေးနွေးဒီဗီဇ, အလားအလာမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုရပ်စဲပြီးနောက်3လကျော်ကြာမြင့်သော prefrontal cortex နှင့် striatum အတွက်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ (လီ et al ။ , 2003).
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသည် corticolimbic circuits များတွင်အစောပိုင်းတုန့်ပြန်မှုနှင့်ပလတ်စတစ်နှင့်ဆိုင်သောမျိုးရိုးဗီဇများတွင်အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြွက်များအားကြွက်များထိတွေ့ခြင်းက c-fos ဤအ ဦး နှောက်ဒေသများရှိစကားရပ်။ ဥပမာအားဖြင့် morphine တွဲဖက်ထားသည့်အချက်များသည် (Fondomotor activation ဖြစ်စေသည့်) ၎င်းသည် medial prefrontal, ventrolateral orbital နှင့် cingulate cortex တွင် Fos ပရိုတင်းဖော်ပြမှုကိုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုအလားတူမော်ဖင်းအကိုက်ရောဂါကုသမှုပေးခဲ့ခြင်း၊ Schroeder et al ။ 2000 နှင့် Schroeder နှင့်ကယ်လီ 2002။ ဆက်စပ်နေသောအကြောင်းအရာများfos prefrontal ဒေသများတွင် induction ကိုကိုကင်း၊ အမ်ဖီတမင်း၊ နီကိုတင်း၊ ဘီယာနှင့်အရသာရှိသောအစားအစာများကိုပြသသည်။ Franklin နှင့် Druhan 2000a, Hotsenpiller et al ။ 2002, Neisewander et al ။ 2000, Schroeder et al ။ 2001 နှင့် Topple et al ။ 1998။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်စုံစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီးမျိုးဗီဇများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် စက်ဝိုင်း (CA Schiltz et al ။ တင်သွင်း; ။ CA Schiltz et al ။ , 2003, Soc Neurosci, abstraction, Volume ။ ) 29) ။ ကြွက်များအားလုံးကိုကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နီကိုတင်းနှင့်ဆားများပေးသည်။ သို့သော်စမ်းသပ်သည့်နေ့၌တိရိစ္ဆာန်များ၏ထက်ဝက်သည်နီကိုတင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးတစ်ဝက်သည်ဆားငန်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ရောက်သွားသည်။ ပြင်းထန်စွာတိုးမြှင့်သွေးဆောင်နီကိုတင်း -related တွေကို စက်ဝိုင်း prefrontal cortex အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းကျယ်ပြန့် sensorimotor cortical ဒေသများတွင် (ကိုကြည့်ပါ) ပုံ 9) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၏အပြုအမူအပေါ်သြဇာသက်ရောက်မှုအတွက် PFC သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟူသောအယူအဆနှင့်အညီ medial PFC ကိုဒေသတွင်းလှုပ်ရှားမှုကင်းကင်းသည်ကိုကင်း - သွေးဆောင်မှုအခြေအနေအရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ထားသည် (Franklin နှင့် Druhan, 2000b).
ပုံ9။ အဆိုပါ Dargritically ပစ်မှတ်ထား mRNA စက်ဝိုင်း နီကိုတင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်စက်ဝိုင်း activated synapses များကိုရည်မှန်းသည်ဟုယူဆရသော mRNA သည် prefrontal cortex အပါအ ၀ င် forebrain cortex မြောက်မြားစွာတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကြွက်များသည်နီကိုတင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် situ hybrid ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဦး နှောက်အပိုင်းများအောက်တွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအေးစက်သည့် protocol ကိုပြထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးသည်တူညီသောနီကိုတင်းကုသမှု (စာသားတွင်ကြည့်ပါ) ကိုရရှိသည်၊ သို့သော်စမ်းသပ်သည့်နေ့၌ထက်ဝက်ကိုဆား (ထိန်းချုပ်မှု) အခြေအနေနှင့်တစ်ဝက်ကိုနီကိုတင်းအခြေအနေတွင်ထားရှိသည်။ (CA Schiltz et al မှတင်ပြသည်။ ၊ CA Schiltz et al ။ , 2003, Soc Neurosci, abstract, Volume ။ ။ ။ 29.)
အစောပိုင်းတုံ့ပြန်မှုဗီဇသော induction ၏ဤပရိုဖိုင်းကိုပလပ်စတစ်နှင့်ခိုင်မာအောင်ဖြစ်စဉ်များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်း cortical ကွန်ရက်များထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေး - အခြေအနေတွင်တွဲဖက်မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာမျိုးဗီဇသော induction တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်လူ့စမ်းသပ် Paradigm အတွက်အာရုံကြော activation မကြာခဏတပ်မက်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအတှေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဗီဇ activation တစ် ဦး "မတိုက်ဆိုင်," ဆုလာဘ် (မူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအစာ) ကိုခန့်မှန်းအချက်များအတွက်ဖြစ်သည့်အတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်, သို့သော်အဓိကဆုလာဘ်ကိုလိုက်နာပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရှောင်ကြဉ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဦး နှောက်တွင်အမြဲတည်ငြိမ်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးထိုအားနည်းချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသရှိအာရုံကြောမော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုများသည်စွဲလမ်းမှုမြင့်မားသောပြည်နယ်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဓိကကျနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည် Jentsch နှင့်တေလာ 1999, London et al ။ 2000 နှင့် Volkow နှင့်မုဆိုး 2000။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အနာဂတ်ဆိုးရွားသောရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသည့်ကြားမှ၊ ထိုကဲ့သို့သော“ မူးယစ်ဆေးဝါးသတိပေးချက်များ” အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သောပြင်ပအချက်များကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသူများသည်အခြေအနေအရအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ prefrontal cortical လုပ်ဆောင်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအချက်ပြမှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိပါကဘာသာရပ်သည်ဤခံစားချက်များကိုကျော်လွန်သောဆန္ဒအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာသည်အလွန်အားနည်းနေနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်အရေးကြီးသောသိမြင်မှုစွဲလမ်းမှုပုံစံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအတွေးများနှင့်အပြုအမူများသည်အလွန်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာပြီးသူတို့၏အစဉ်အလာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဆန္ဒအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်ဟုဆိုထားသည်။ (Tiffany and Conklin, ၂၀၀၀).
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်သဘာဝဆုလာဘ်များသင်ကြားခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်မျှဝေထားသောအခြေခံယန္တရားများကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပေါင်းစပ်အာရုံကြောစနစ်များမူဘောင်အတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ Neurochemically coded ဦး နှောက်ဆားကစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ရှင်သန်မှုတိုးမြှင့်အတွက်အရေးပါသောအလွှာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုစနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောသက်ရှိများ၏အပြုအမူများတွင်၎င်း၏မော်လီကျူးအမြစ်များရှိသည်။ ဤနည်းစနစ်များသည်တိရိစ္ဆာန်များအားအရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများ (အစားအစာ၊ မိတ်လိုက်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ အမိုးအကာ) နှင့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီတိုက်နယ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်, အနည်းဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ, hypothalamus နှင့် brainstem နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့် corticostriatal နှင့် limbic အဆောက်အ ဦ အတွင်း core ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များအကြားအပြန်အလှန်နှင့် feedforward ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ cortical နှင့် subcortical network များအကြားဤစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုသည်ရှင်သန်မှုအပြုအမူများကိုမြှင့်တင်ရန်တည်ရှိနေသောအခြေခံစိတ်ခွန်အားနိုးသည့်စနစ်များနှင့်အတူ phylogenetically ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦး နှောက်ဒေသများ၊ ရှုပ်ထွေးသောသိမှတ်မှု၊ Neurochemical နှင့် intracellular molecular coding သည်ဤကွန်ယက်များအတွင်းအထူးသဖြင့်တိကျသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ပလပ်စတစ်မှုများကိုပေးသည်။ ဤ circuit များအတွင်းရှိပလပ်စတစ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် glutamate- နှင့် dopamine-mediated အချက်ပြမှုနှင့်၎င်း၏ဆဲလ်များနှင့် Genomic အကျိုးဆက်များကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖျန်ဖြေပေးသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုစနစ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုအမူနှင့်သင်ယူမှုတွင်အလွန်အသုံးဝင်သောနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အခန်းကဏ္serveကိုထမ်းဆောင်နေစဉ်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုတွင်မအောင်မြင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနသည် ဦး နှောက်ဆုချခြင်းတိုက်ဖျက်ရေး၏ဓာတု၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသဘောသဘာဝနှင့်စွဲလမ်းမှုအားပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မှာသေချာသည်။
ငါသူမ၏ဆေးအနုပညာအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့် DA09311 ထံမှထောက်ပံ့ငွေ DA04788 နှင့် DAXNUMX ထံမှထောက်ခံမှုဝန်ခံချင်ပါတယ်။
အာဗေလနှင့် Lattal 2001
T. အာဗေလ, KM Lattal
ကြက်သွန်ဖြူ။ ထင်မြင်ချက်။ Neurobiol, 11 (2001), စစ။ 180-187
သိပ္ပံ, 153 (1966), စစ။ 708-716
Aigner နှင့် Balster 1978
TG Aigner, RL Balster
rhesus monkeyscocaine ကိုအစားအစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
သိပ္ပံ, 201 (1978), စစ။ 534-535
Alleweireldt et al ။ 2002
Alleweireldt, SM Weber, KF Kirschner, BL Bullock, JL Neisewander
D1 dopamine receptors ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်နှိုးဆွမှုသည်ကြွက်များရှိငတ်မွတ်သောကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူများအားပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအား cue ပြန်လည်ထူထောင်စေသည်။
Psychopharmacology (Berl ။ ), 159 (2002), စစ။ 284-293
Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင် 1996
စင်ကာပူဒေါ်လာ Anagnostaras, TE ရော်ဘင်ဆင်
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသင်ယူမှုအားဖြင့် amphetaminemodulation ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှအာရုံခံ
Behav ။ Neurosci, 110 (1996), စစ။ 1397-1414
Anderson က et al ။ 2003
SM Anderson၊ AA Bari၊ RC Pierce
D1 ကဲ့သို့သော dopamine receptor antagonist SCH-23390 ကိုအုပ်ချုပ်မှုနျူကလိယထဲသို့အခွံ accumbens shell ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်အပြုအမူများအားကိုကင်းဆေးရည် - သွေးဆောင်မှုပြန်လည်ပေးအပ်
Psychopharmacology (Berl ။ ), 168 (2003), စစ။ 132-138
Andrzejewski et al ။ 2004
ME Andrzejewski, K. Sadeghian, AE Kelley
ဆာပသင်ယူမှုအတွက်ဗဟို amygdalar နှင့် dorsal striatal NMDA- အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု
Behav ။ Neurosci, 118 (2004), စစ။ 715-729
Badiani et al ။ 1997
A. အ Badiani, DM စခန်း, TE ရော်ဘင်ဆင်
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်အမ်ဖီတမင်းစိတ်ခံစားမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်း
ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther, 282 (1997), စစ။ 787-794
Badiani et al ။ 1998
အေ Badiani, MM Oates, HE နေ့, SJ Watson, အိပ်ချ် Akil, TE ရော်ဘင်ဆင်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်းအားဖြင့်အမ်ဖီတမင်း - သွေးဆောင်အပြုအမူ, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်က c-fos mRNA expressionmodulation
ဂျေ Neurosci, 18 (1998), စစ။ 10579-10593
Baldo et al ။ 2003
BA Baldo၊ RA ဒံယလေ၊ CW Berridge၊ AE Kelley
ကြွက် ဦး နှောက်ဒေသများတွင်နှိုးဆွမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသော orexin / hypocretin- နှင့် dopamine-beta-hydroxylase immunoreactive အမျှင်များ၏ထပ်ဖြန့်မှုများ။
ဂျေ Comp ။ Neurol, 464 (2003), စစ။ 220-237
Baldwin et al ။ 2002a
AE Baldwin, K. Sadeghian, MR Holahan, AE Kelley
နျူကလိယ accumbens အတွင်း cAMP- မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏တားစီးခြင်းဖြင့် Appetitive ဆာပသင်ယူမှုချို့ယွင်းသည်
Neurobiol ။ လေ့လာပါ Mem, 77 (2002), စစ။ 44-62 တစ် ဦး
Baldwin et al ။ 2002b
AE Baldwin, K. Sadeghian, AE Kelley
Appetitive ဆာပသင်ယူမှုသည် medial prefrontal cortex အတွင်း NMDA နှင့် dopamine D1 receptors ကိုတိုက်ဆိုင်စွာ activation လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 1063-1071 ခ
အလိုက်ဝေဖန်သူများနှင့် Basal ganglia
JC Houk၊ JL Davis၊ DG Beiser (Eds)၊ Basal Ganglia မှသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူခြင်း၊ MIT စာနယ်ဇင်း၊ ကင်းဘရစ်၊ MA (၁၉၉၅)၊ စစ။ ၂၁၅-၂၃၂
Berke နှင့် Hyman 2000
JD Berke, SE Hyman
စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ
အာရုံခံဆဲလျ, 25 (2000), စစ။ 515-532
Bibb et al ။ 2001
ဂျေ။ ချန်၊ ဂျေ။ ရတေလာ၊ ပီ။ စဗင်နင်ဆင်၊ အေနီရှီ၊ GL ဆိုင်းဒါ၊ et al ။
ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်
သဘာဝတရား, 410 (2001), စစ။ 376-380
ဆရာတော် et al ။ 2002
GB ဆရာတော်၊ WE Cullinan၊ E. Curran, HB Gutstein
အလွဲသုံးစားမှုရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် RGS4 mRNA အဆင့်များကိုကြွက်များ၏ ဦး နှောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆင့်မြင့်ဆေးကုသမှုနှင့်နာတာရှည်ကုသမှုအပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးစိန်ခေါ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးသည်။
Neurobiol ။ dis, 10 (2002), စစ။ 334-343
တိုနီဘလဲ et al ။ 1998
HT တိုနီဘလဲ, ဂျေချို, PE Sharp က
ကြွက် ဦး ခေါင်း ဦး တည်ချက် circuita အတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် mammillary နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ single တစ်ခုတည်းယူနစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှု
အာရုံခံဆဲလျ, 21 (1998), စစ။ 1387-1397
Bonson et al ။ 2002
KR Bonson၊ SJ Grant၊ CS Contoreggi၊ JM Links၊ J. Metcalfe, HL Weyl, V. Kurian, M. Ernst, ED London
အာရုံကြောစနစ်များနှင့် cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတဏှာ
Neuropsychopharmacology, 26 (2002), စစ။ 376-386
Bower et al ။ 2004
MS Bowers, K. McFarland, RW Lake, YK Peterson, CC Lapish, ML Gregory, SM Lanier, PW Kalivas
ကိုကင်း sensitization နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု၏ 3A တံခါးစောင့် G ကိုပရိုတိန်းအချက်ပြ၏ Activator
အာရုံခံဆဲလျ, 42 (2004), စစ။ 269-281
Bozarth နှင့်ပညာရှိ 1985
MA Bozarth, RA ပညာရှိ
ဂျေအေအမ်အေ, 254 (1985), စစ။ 81-83
Brancucci et al ။ 2004
A. အ Brancucci, N. Berretta, NB Mercuri, ဒဗလျူ Francesconi
gamma-hydroxybutyrate နှင့် ethanol တို့သည်အလိုအလျောက် excitatory postsynaptic current မ်ားကို sustia nigra ၏ dopaminergic အာရုံခံများတွင်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။
ဦးနှောက် Res, 997 (2004), စစ။ 62-66
Brembs et al ။ 2002
ခ Brembs, FD Lorenzetti, FD Reyes, DA Baxter, JH Byrne
Aplysianeuronal ဆက်စပ်မှုနှင့်ယန္တရားများအတွက် Operant ဆုလာဘ်
သိပ္ပံ, 296 (2002), စစ။ 1706-1709
အဆိုပါဇီဝ affectsa typology
စိတ်ရောဂါ။ ဗြာ, 106 (1999), စစ။ 301-336
Cardinal နှင့် Everitt 2004
RN Cardinal, BJ Everitt
ကြက်သွန်ဖြူ။ ထင်မြင်ချက်။ Neurobiol, 14 (2004), စစ။ 156-162
Cardinal et al ။ 2002
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက် amygdala, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex
Neurosci ။ ဇီဝဗေဒ။ ဗြာ, 26 (2002), စစ။ 321-352
Centonze et al ။ 2003
Cent Centonze, P. Gubellini, အေ Pisani, G. အ Bernardi, P. Calabresi
dopamine, acetylcholine နှင့် nitric oxide စနစ်များသည် corticostriatal synaptic plasticity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်
ဗျာ Neurosci, 14 (2003), စစ။ 207-216
Cepeda et al ။ 1993
C. Cepeda, NA Buchwald, MS Levine
အဆိုပါ neostriatum အတွက် dopamine ၏ Neuromodulatory လုပ်ရပ်များဟာ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ကြသည်။
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 90 (1993), စစ။ 9576-9580
Cepeda et al ။ 1998
C. Cepeda, CS Colwell, JN Itri, SH Chandler, MS Levine
ကယ်လစီယမ်အမူအကျင့်၏ slicescontribution အတွက် neostriatal အာရုံခံအတွက် NMDA- သွေးဆောင်မြေတပြင်လုံးဆဲလ်ရေစီးကြောင်း၏ Dopaminergic မော်ဂျူ
ဂျေ Neurophysiol, 79 (1998), စစ။ 82-94
Chao et al ။ 2002
SZ Chao, MA Ariano, DA Peterson, ME Wolf
D1 dopamine အဲဒီ receptor ဆွနျူကလိယအတွက် GluR1 မျက်နှာပြင်စကားရပ်တိုးပွားလာအာရုံခံ accumbens
ဂျေ Neurochem, 83 (2002), စစ။ 704-712
Childress et al ။ 1986
AR Childress၊ မက်ခ်လန်၊ CP အိုဘရိုင်ယန်
abstinent opiate အလွဲသုံးစားမှုမျိုးသုဉ်းမှတဆင့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အေးစက်တဏှာ, အေးစက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျှော့ချပြ
br ။ ဂျေစွဲ, 81 (1986), စစ။ 655-660
Childress et al ။ 1999
AR Childress, PD Mozley, W. McElgin, J. Fitzgerald, M. Reivich, CP O'Brien
cue- သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 156 (1999), စစ။ 11-18
Ciccocioppo et al ။ 2001
R. Ciccocioppo, PP Sanna, အက်ဖ် Weiss
ကိုကို - ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု D (1) ရန်သူများအားဖြင့် abstinencereversal လပေါင်းများစွာပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေအပြုအမူများနှင့် limbic ဦး နှောက်ဒေသများတွင်အာရုံကြော activation သွေးဆောင်
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 98 (2001), စစ။ 1976-1981
Colwill နှင့် Rescorla 1990
RM Colwill, RA Rescorla
ဂျေ Exp ။ စိတ်ရောဂါ။ Anim ။ Behav ။ လုပ်ငန်းစဉ်, 16 (1990), စစ။ 40-47
Corbit et al ။ ၂၀၀၁
LH Corbit, JL Muir, BW Balleine
နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္.ကို accumbens core နှင့် shell အကြားတစ် ဦး အလုပ်လုပ်တဲ့ dissociation ၏ဆာပ ConditionEvidence အတွက် accumbens
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 3251-3260
Cornish အဘိဓါန်များနှင့် Kalivas 2000
JL Cornish, PW Kalivas
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အချိုမှုဂီယာကိုကင်းစွဲအတွက် relapse mediates
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), p ။ RC89
Dani et al ။ ၂၀၀၁
ဂျေအေဒန်နီ၊ Ji ဂျီ၊ FM Zhou
အာရုံခံဆဲလျ, 31 (2001), စစ။ 349-352
Das et al ။ 1997
အက်စ် Das, အမ် Grunert, အယ်လ်ဝီလျံ, SR ဗင်းဆင့်
NMDA နှင့် D1 receptors များသည် CREB ၏ phosphorylation နှင့်မူလယဉ်ကျေးမှုတွင် striatal neuron များရှိ c-fos များ၏ induction ကိုထိန်းညှိသည်။
synapses, 25 (1997), စစ။ 227-233
Dayan နှင့် Balleine 2002
P. Dayan, BW Balleine
အာရုံခံဆဲလျ, 36 (2002), စစ။ 285-298
de Leonibus et al ။ 2003
နျူကလိယအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသော ionotropic glutamate receptors ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ pass များသည်ကြွက်များတွင် passive-avoiding learning နှင့် memory တွင် accumbens
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 18 (2003), စစ။ 2365-2373
di Ciano et al ။ 2001
P. Di Ciano, RN Cardinal, RA Cowell, SJ Little, BJ Everitt
နျူကလိယအတွက် NMDA, AMPA / kainate နှင့် dopamine receptors ၏ကွဲပြားခြားနားပတ်သက်မှု pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် core ကို accumbens
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 9471-9477
di Ciano နှင့် Everitt 2004
P. Di Ciano, BJ Everitt
ကြွက်များအနေဖြင့် basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယအကြားတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုအခြေခံသည်
ဂျေ Neurosci, 24 (2004), စစ။ 7167-7173
di Chiara 1998
G. အ Di Chiara
compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအတွက် mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္motivကိုတစ် ဦး ကစိတ်ခွန်အားနိုးလေ့လာသင်ယူမှုအယူအဆ
ဂျေ Psychopharmacol, 12 (1998), စစ။ 54-67
Dickinson နှင့် Balleine 1994
A. အ Dickinson, ခ Balleine
ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားချက်အရေးယူမှု၏စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှု
Anim ။ လေ့လာပါ Behav, 22 (1994), စစ။ 1-18
Droungas et al ။ 1995
A. Droungas, RN Ehrman, AR Childress, CP O'Brien
စှဲလမျးသူ။ Behav, 20 (1995), စစ။ 657-673
စွဲ, 97 (2002), စစ။ 381-388
Espana et al ။ ၂၀၀၁
RA Espana, BA Baldo, AE Kelley, CW Berridge
hypocretin (orexin) Basal forebrain လုပ်ဆောင်သောနေရာများ၏နိုးထမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုဖိနှိပ်သည်
neuroscience, 106 (2001), စစ။ 699-715
Everitt et al ။ 1999
BJ Everitt, JA Parkinson, MC Olmstead, M. Arroyo, P. Robledo, TW Robbins
စွဲလမ်းနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် Associative ဖြစ်စဉ်များ။ amygdala-ventral striatal subsystem ၏အခန်းကဏ္ဍကို
အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ, 877 (1999), စစ။ 412-438
Everitt et al ။ 2001
BJ Everitt၊ အေဒစ်ကင်ဆန်၊ တီဗီရော်ဘင်
စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ
Brain Res ။ Brain Res ။ ဗြာ, 36 (2001), စစ။ 129-138
Fiorino နှင့် Phillips 1999
DF Fiorino, AG Phillips
D-amphetamine သွေးဆောင်အပြုအမူဆိုင်ရာ sensitization အပြီးလိင်အပြုအမူများနှင့်အထီးကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် dopamine efflux
ဂျေ Neurosci, 19 (1999), စစ။ 456-463
Floresco et al ။ 2001a
SB Floresco, CD ကို Blaha, CR ယန်, AG က Phillips က
Dopamine D1 နှင့် NMDA receptors တို့သည်နျူကလိယ၏ basolateral amygdala- evoked ပစ်ခတ်မှု၏စွမ်းရည်ကိုဖျန်ဖြေ
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 6370-6376 တစ် ဦး
Floresco et al ။ 2001b
နျူကလိယ၏ hippocampal နှင့် amygdalar- evoked လှုပ်ရှားမှု၏မော်ဂျူ input ကိုရွေးချယ်ရေး၏ dopaminecellular ယန္တရားများအားဖြင့်အာရုံခံ accumbens
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 2851-2860 ခ
Floyd et al ။ ၂၀၀၁
ကူးတို့၊ NS Floyd၊ JL စျေး၊ KA Keay၊ R. Bandler
ကြွက်များတွင် hypothalamus မှ Orbitomedial prefrontal cortical စီမံကိန်း
ဂျေ Comp ။ Neurol, 432 (2001), စစ။ 307-328
Franklin နှင့် Druhan 2000a
TR Franklin, JP Druhan
ကိုကင်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများရှိ Fos နှင့်သက်ဆိုင်သော antigen များအားဖော်ပြခြင်း
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 12 (2000), စစ။ 2097-2106 တစ် ဦး
Franklin နှင့် Druhan 2000b
ကြွက်များတွင်ကိုကင်း - ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့အေးစက် hyperactivity ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် medial prefrontal cortex ၏ပါဝင်မှု
Neuropsychopharmacology, 23 (2000), စစ။ 633-644 ခ
Friston et al ။ 1994
KJ Friston, G. အ Tononi, GN Reeke Jr. O. Sporns, GM Edelman
တစ်ဒြပ်အာရုံကြောမော်ဒယ်အတွက် brainsimulation အတွက် Value- မှီခိုရွေးချယ်ရေး
neuroscience, 59 (1994), စစ။ 229-243
Ghasemzadeh et al ။ 2003
MB Ghasemzadeh, LK Permenter, R. Lake, PF Worley, PW Kalivas
Homer1 ပရိုတိန်းနှင့် AMPA receptors ကိုကင်း - သွေးဆောင်အပြုအမူ plasticity modulate
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 18 (2003), စစ။ 1645-1651
စတိန်းနှင့် Volkow 2002
RZ စတိန်း, ND Volkow
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒအခြေခံသည့် cortex ပါဝင်မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများ
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 159 (2002), စစ။ 1642-1652
Goto နှင့် O'Donnell 2001
Y. Goto, P. O'Donnell
vipp အတွက် hippocampus နှင့်နျူကလိယအတွက်ထပ်တူပြုခြင်းလှုပ်ရှားမှု accumbens
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), p ။ RC131
Goto နှင့် O'Donnell 2002
နျူကလိယအတွက်အချိန် - မှီခို limbic- မော်တာ synaptic ပေါင်းစည်းမှု accumbens
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 99 (2002), စစ။ 13189-13193
Greengard et al ။ 1998
P. Greengard, AC Nairn, JA Girault, CC Ouimet, GL Snyder, G. Fisone, PB Allen, A. Fienberg, A. Nishi
signal DARPP-32 / protein phosphatase-1 cascadea ပုံစံ
Brain Res ။ Brain Res ။ ဗြာ, 26 (1998), စစ။ 274-284
Gurden et al ။ 1999
အိပ်ချ် Gurden, JP Tassin, TM TM ဂျေး
ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်အတွက် in vivo hippocampal-prefrontal cortex ၏ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်အတွက် mesocortical dopaminergic စနစ်၏သမာဓိလိုအပ်သည်
neuroscience, 94 (1999), စစ။ 1019-1027
Gurden et al ။ 2000
အိပ်ချ် Gurden, အမ် Takita, TM TM ဂျေး
vivo အတွက် hippocampal-prefrontal cortex synapses မှာ NMDA အဲဒီ receptor- မှီခိုရေရှည်အာနိသင်အတွက် D1 ဒါပေမယ့် D2 receptors ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္ role
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), p ။ RC106
Hall et al ။ ၂၀၀၁
ဂျေခန်းမ, KL သောမတ်စ်, BJ Everitt
ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစဉ်အတွင်း hippocampal CA268 အာရုံခံ၏ရှေးခယျြမှုနှင့် cued ကွောကျရှံ့သောမှတ်ဉာဏ် retrievalselective activation စဉ်အတွင်း hippocampus နှင့် amygdala အတွက် zif1 စကားရပ်၏ဆယ်လူလာပုံရိပ်
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 2186-2193
Harvey နှင့် Lacey 1997
ဂျေ Harvey, MG Lacey
dopamine D1 နှင့် NMDA receptors များအကြား postsynaptic အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် adenosine ထုတ်လွှတ်မှုမှတစ်ဆင့်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် presynaptic တားစီးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်
ဂျေ Neurosci, 17 (1997), စစ။ 5271-5280
ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ 2002
PJ ဟာနန်ဒက်ဇ်, K. Sadeghian, AE ကယ်လီ
ဆာပသင်ယူမှု၏အစောပိုင်းစုစည်းမှုသည်နျူကလိယ accumbens အတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်
နတ် Neurosci,5(2002), စစ။ 1327-1331
ဟာနန်ဒက်ဇ်-လိုပက်ဇ် et al ။ 1997
အက်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ် -lopez, ဂျေ Bargas, DJ သမား Surmeier, အေ Reyes, အီး Galarraga
D1 receptor activation သည် neostriatal medium spiny neurons များတွင် LPG အမျိုးအစား Ca2 + စီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ထွက်ပေါ်စေသည်။
ဂျေ Neurosci, 17 (1997), စစ။ 3334-3342
အဓိက non- ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များမှ Mesolimbocortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု
neuroscience, 96 (2000), စစ။ 651-656
striatum မှ glutamatergic sensorimotor နှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုး input ကိုအချက်ပြ၏ Dopamine တံခါး
Behav ။ ဦး နှောက် Res, 137 (2002), စစ။ 65-74
Hotsenpiller et al ။ 2001
G. အ Hotsenpiller, အမ် Giorgetti, ME Wolf
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 14 (2001), စစ။ 1843-1855
Hotsenpiller et al ။ 2002
G. အ Hotsenpiller, BT Horak, ME Wolf
ယခင်ကကိုကင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် conditional locomotion နှင့် Fos induction ကိုခွဲထုတ်ခဲ့သည်
Behav ။ Neurosci, 116 (2002), စစ။ 634-645
အာရုံခံဆဲလျ, 16 (1996), စစ။ 901-904
Hyman နှင့် Malenka 2001
SE Hyman, RC Malenka
စွဲခြင်းနှင့်မလှူရခြင်း၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ
နတ် ဗျာ Neurosci,2(2001), စစ။ 695-703
ဂျေး et al ။ 1995
TM ဂျေး, အက်ဖ် Burette, အက်စ် Laroche
ကြွက်များတွင် prefrontal cortex မှ hippocampal afferent ဖိုင်ဘာစနစ်အတွက် NMDA အဲဒီ receptor- မှီခိုရေရှည်အလားအလာ
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci,7(1995), စစ။ 247-250
ဂျေး et al ။ 1998
TM ဂျေး, အိပ်ချ် Gurden, တီ Yamaguchi
vivo in prefrontal cortex သို့ hippocampal afferent fiber ဖိုင်စနစ်အတွင်းရေရှည်အာနိသင်တိုးမြှင့်နေစဉ် PKA လှုပ်ရှားမှုလျင်မြန်စွာတိုးလာ
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 10 (1998), စစ။ 3302-3306
Jentsch နှင့်တေလာ 1999
JD Jentsch, JR တေလာ
ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse
Psychopharmacology (Berl ။ ), 146 (1999), စစ။ 373-390
မျိုးဗီဇနှင့် synapses အကြားမှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ
သိပ္ပံ, 294 (2001), စစ။ 1030-1038
Kaplan et al ။ 1985
Pomerleau ၏ RF Kaplan, NL Cooney, LH Baker, RA Gillespie, RE Meyer
အရက်သမားနှင့်ပြproနာမဟုတ်သောသောက်သူများ၏အရက်နှင့်ဆိုင်သော cuesphysiological နှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္တုံ့ပြန်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှု
ဂျေလုံး။ အရက်, 46 (1985), စစ။ 267-272
Keefe နှင့် Gerfen 1996
Ka Keefe, CR Gerfen
အဆိုပါ dopamine- ကုန်ခမ်း striatumdifferential စည်းမျဉ်းများနှင့် NMDA receptors ကနေလွတ်လပ်ရေးအတွက် zif1 နှင့် c-fos ၏ D268 dopamine အဲဒီ receptor-mediated induction
ဂျေ Comp ။ Neurol, 367 (1996), စစ။ 165-176
Kehoe နှင့် Blass 1986
P. Kehoe, EM Blass
မွေးကင်းစ ratsI အတွက်အပြုအမူအလုပ်လုပ်တဲ့ opioid စနစ်များ။ olfactory နှင့်စိုစွတ်စေသောဂန္ထဝင်အေးစက်စေသောအထောက်အထား
Behav ။ Neurosci, 100 (1986), စစ။ 359-367
JM Fellous, MA Arbib (Eds ။ )၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမည်သူလိုအပ်သနည်း။ ဦး နှောက်သည်စက်ရုပ်နှင့်တွေ့သည်။ Oxford University Press, New York (2004) a
အူလမ်းကြောင်းအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ် -related သင်ယူမှုအတွက် appetitive motivationrole ၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု
အာရုံကြော။ ဇီဝဗေဒ။ ဗြာ, 27 (2004), စစ။ 765-776 ခ
ကယ်လီနှင့် Berridge 2002
AE ကယ်လီ, KC Berridge
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 3306-3311
Kelley et al ။ 1997
AE ကယ်လီ၊ SL Smith-Roe၊ MR Holahan
တုံ့ပြန်မှု - အားဖြည့်သင်ယူမှုနျူကလိယအတွက် N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor activation core ကို accumbens
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 94 (1997), စစ။ 12174-12179
Kelley et al ။ 2003
AE Kelley, ME Andrzejewski, AE Baldwin, PJ Hernandez, WE Pratt
သပ္ပါယ်မော်တာသင်ယူမှုအတွက် corticostriatal networksrole အတွက်အချိုမှု -mediated ပလပ်စတစ်
အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ, 1003 (2003), စစ။ 159-168
ကယ်လီနှင့် Deadwyler 2002
အမတ်ကယ်လီ, လုပ် SA Deadwyler
၀ တ္ထုအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်လွန်ကဲခြင်းထက် Arc mRNA အဆင့်ပိုမိုမြင့်မားစေသည်
neuroscience, 110 (2002), စစ။ 617-626
ကယ်လီနှင့် Deadwyler 2003
ချက်ချင်း - အစောပိုင်းဗီဇ arc ၏အတွေ့အကြုံ - မှီခိုစည်းမျဉ်း ဦး နှောက်ဒေသများအနှံ့ကွဲပြားနေသည်
ဂျေ Neurosci, 23 (2003), စစ။ 6443-6451
Kenny et al ။ 2003
PJ Kenny, NE Paterson, B. Boutrel, S. Semenova, AA Harrison, F. Gasparini, GF Koob, PD Skoubis, A. Markou
Metabotropic glutamate5receptor antagonist MPEP ကကြွက်များတွင် ဦး နှောက်ဆု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုသော်လည်းနီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင်လွယ်ကူချောမွေ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ, 1003 (2003), စစ။ 415-418
Kerr နှင့် Wickens 2001
JN Kerr, JR Wickens
Dopamine D-1 / D-5 receptor activation သည်ကြွက် neostriatum ရှိစကြ ၀ inာရှိရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဂျေ Neurophysiol, 85 (2001), စစ။ 117-124
Khroyan et al ။ 2003
တီဗီ Khroyan, DM Platt, JK Rowlett, RD Spealman
dopamine D1 receptor agonists နှင့်လူမဟုတ်သောမျောက်များမှဆန့်ကျင်သူများကကိုကင်းကိုရှာဖွေခြင်းမှပြန်လည်သက်သာသွားခြင်းကို attenuation
Psychopharmacology (Berl ။ ), 168 (2003), စစ။ 124-131
Kilts et al ။ 2001
CD Kilts၊ JB Schweitzer, CK Quinn, RE Gross, TL Faber, F. Muhammad, TD Ely, JM Hoffman, KP Drexler
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 58 (2001), စစ။ 334-341
Klebaur et al ။ 2002
ဂျေကေကဘာဘာ၊ MM Ostrander၊ CS Norton၊ SJ Watson, H. Akil, TE Robinson
အမ်ဖက်တမင်း၏ arc (Arg 3.1) mRNA ဖော်ပြမှုကို caudate, nucleus accumbens နှင့် neocortex တွင်သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဦးနှောက် Res, 930 (2002), စစ။ 30-36
Konradi et al ။ ၁၉၉၆
C. Konradi, JC Leveque, SE Hyman
striatal အာရုံခံများတွင်အမ်ဖီတမင်းနှင့် dopamine သွေးဆောင်ချက်ချင်းမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်သည် postsynaptic NMDA receptors နှင့် calcium ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဂျေ Neurosci, 16 (1996), စစ။ 4231-4239
Koob နှင့် Le Moal 1997
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု homeostatic dysregulation
သိပ္ပံ, 278 (1997), စစ။ 52-58
Koob et al ။ 1998
GF Koob, AJ Roberts သည်, G. Schulteis, LH Parsons, CJ Heyser, P. Hyytia, E. Merlo-Pich, F. Weiss
အီသနောဆုလာဘ်များနှင့်မှီခိုအတွက် Neurocircuitry ပစ်မှတ်
အရက်။ Clin ။ Exp ။ res, 22 (1998), စစ။ 3-9
Koob et al ။ 2004
GF Koob, SH Ahmed, B. Boutrel, SA Chen, PJ Kenny, A. Markou, LE O'Dell, LH Parsons, PP Sanna
မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် Neurobiological ယန္တရားများ
Neurosci ။ ဇီဝဗေဒ။ ဗြာ, 27 (2004), စစ။ 739-749
striatum အတွက် glutamatergic နှင့် dopaminergic အချက်ပြမှုများ Postsynaptic ပေါင်းစည်းမှု
Prog ။ Neurobiol, 44 (1994), စစ။ 163-196
Lee က et al ။ 2002
FJ Lee၊ S. Xue, L. Pei, B. Vukusic, N. Chery, Y. Wang, YT Wang, HB Niznik, XM Yu, F. Liu
အဆိုပါ dopamine D1 အဲဒီ receptor နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ပရိုတိန်း - ပရိုတိန်း interaction ကအားဖြင့် NMDA အဲဒီ receptor လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ dual- စည်းမျဉ်း
ဆဲလ်, 111 (2002), စစ။ 219-230
Lewis ကနှင့် O'Donnell 2000
BL Lewis က, P. O'Donnell
အဆိုပါ prefrontal cortex မှ Ventral tegmental affရိယာ afferents: D (1) dopamine receptors မှတဆင့် pyramidal အာရုံခံအတွက်ပြည်နယ်များအမြှေးပါးအလားအလာ'up 'ကိုထိန်းသိမ်းရန်
Cereb ။ cortex, 10 (2000), စစ။ 1168-1175
| Scopus (158) တွင်အားဖြင့် Cited
လီ et al ။ 2003
Y. Li, ခ Kolb, TE ရော်ဘင်ဆင်
နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် caudate-putamen အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်မြဲစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏တည်နေရာ
Neuropsychopharmacology, 28 (2003), စစ။ 1082-1085
| Scopus (81) တွင်အားဖြင့် Cited
Liste et al ။ 1997
I. Liste, MJ Guerra, HJ Caruncho, JL Labandeira-Garcia
Treadmill ပြေးခြင်းသည် NMDA အချိုမှုနှင့် dopamine receptors မှတဆင့် striatal Fos ဖော်ပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Exp ။ ဦး နှောက် Res, 115 (1997), စစ။ 458-468
| Scopus (47) တွင်အားဖြင့် Cited
London et al ။ 2000
ED London, အမ် Ernst, S. Grant, K. Bonson, A. Weinstein
Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု
Cereb ။ cortex, 10 (2000), စစ။ 334-342
| Scopus (193) တွင်အားဖြင့် Cited
မေတ္တာရှင် et al ။ 2003
DM Lovinger, JG Partridge, KC Tang
အများအပြား neurotransmitter ၏ ensemble လုပ်ရပ်များနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ပစ်မှတ်အားဖြင့် striatal glutamatergic ဂီယာ၏ပလပ်စတစ်ထိန်းချုပ်မှု
အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ, 1003 (2003), စစ။ 226-240
| Scopus (44) တွင်အားဖြင့် Cited
Ludwig et al ။ 1974
AM Ludwig, A. Wikler, LH Stark
ပထမ ဦး ဆုံးသောက်စရာ။ တဏှာ၏ Psychobiological ရှုထောင့်
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 30 (1974), စစ။ 539-547
Luft et al ။ 2004
AR Luft, MM Buitrago, T. Ringer, J. Dichgans, JB Schulz
မော်တာကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်မော်တာ cortex ရှိပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်
ဂျေ Neurosci, 24 (2004), စစ။ 6515-6520
Maldve et al ။ 2002
RE Maldve, TA Zhang, K. Ferrani-Kile, SS Schreiber, MJ Lippmann, GL Snyder, AA Fienberg, SW Leslie, RA Gonzales, RA Morrisett
DARPP-32 နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် NMDA receptors ၏အီသနော sensitivity ကို၏စည်းမျဉ်း
နတ် Neurosci,5(2002), စစ။ 641-648
Malenka နှင့် Nicoll 1999
RC Malenka, RA Nicoll
နှစ်ရှည်တိုးတက်မှု - ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏တိုးတက်မှုလော။
သိပ္ပံ, 285 (1999), စစ။ 1870-1874
Mangiavacchi နှင့် Wolf 2004
အက်စ် Mangiavacchi, ME Wolf
D1 dopamine receptor stimulation သည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနျူကလိယ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ AMPA receptor ထည့်သွင်းနှုန်းကိုတိုးပွားစေပြီးပရိုတိန်း kinase A ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဂျေ Neurochem, 88 (2004), စစ။ 1261-1271
Mansvelder နှင့် McGehee 2000
HD Mansvelder, DS McGehee
နီကိုတင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသွင်းအားစုများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှု
အာရုံခံဆဲလျ, 27 (2000), စစ။ 349-357
Mato et al ။ 2004
အက်စ် Mato, V. Chevaleyre, D. Robbe, အေ Pazos, PE Castillo, OJ Manzoni
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 9THC ထိတွေ့မှုတစ်ခုအတွက်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုသည် endocannabinoid-mediated synaptic plasticity
နတ် Neurosci,7(2004), စစ။ 585-586
McFarland et al ။ 2003
K. McFarland, CC Lapish, PW Kalivas
နျူကလီးယပ် accumbens ၏အဓိကသို့ Prefrontal အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement mediates
ဂျေ Neurosci, 23 (2003), စစ။ 3531-3537
Melis et al ။ 2002
အမ် Melis, R. Camarini, MA Ungless, အေ Bonci
vivo အီသနောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြီးတွင် dopamine neuron များရှိ GABAergic synapses ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 2074-2082
မောရစ် et al ။ 2003
RG Morris, EI Moser, G. Riedel, SJ Martin, ဂျေဆန်ဒင်၊ အမ်ဒီ၊ စီ။ အိုကာရယ်လ်
မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှု - မှီခို synaptic plasticity ၏ hippocampusthe အခန်းကဏ္ of တစ်ခု neurobiological သီအိုရီ၏ဒြပ်စင်
Philos ။ ဖြတ်ကျော် R. Soc ။ Lond ။ B Biol ။ သိပ္ပံ, 358 (2003), စစ။ 773-786
Mulder et al ။ 1997
AB Mulder၊ အမတ်အနုပညာ၊ FH Lopes da Silva
ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex လမ်းကြောင်းမှ hippocampus ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်ပလပ်စတစ် in vivo
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci,9(1997), စစ။ 1603-1611
Mulder et al ။ 1998
AB Mulder, MG Hodenpijl, FH Lopes da Silva
သွင်းအားစုများ၏ ratconvergence, အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့်အပြန်အလှန်၏နျူကလိယ accumbens မှ hippocampal နှင့် amygdaloid စီမံကိန်းများ၏ Electrophysiology
ဂျေ Neurosci, 18 (1998), စစ။ 5095-5102
Neisewander et al ။ 2000
JL Neisewander, DA Baker, RA Fuchs, LT Tran-Nguyen, A. Palmer, JF Marshall
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), စစ။ 798-805
Nesse နှင့် Berridge 1997
RM Nesse, KC Berridge
သိပ္ပံ, 278 (1997), စစ။ 63-66
Nestler et al ။ 1999
EJ Nestler, MB Kelz, ဂျေချန်
ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ပလပ်စတစ်၏ DeltaFosBa မော်လီကျူးအာမခံ
ဦးနှောက် Res, 835 (1999), စစ။ 10-17
Nicola et al ။ 2000
SM နီကိုလာ, ဂျေ Surmeier, RC Malenka
အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှား၏ Dopaminergic မော်ဂျူ
Annu ။ ဗျာ Neurosci, 23 (2000), စစ။ 185-215
O'Brien et al ။ ၂၀၀၆
CP O'Brien, AR Childress, T. McLellan, R. Ehrman
စွဲ၏တစ် ဦး ကသင်ယူမှုမော်ဒယ်
CP O'Brien, J. Jaffe (Eds ။ )၊ စွဲလမ်းစေသောနိုင်ငံများ၊ Raven Press၊ နယူးယောက် (၁၉၉၂)၊ စစ။ ၁၅၇-၁၇၇
O'Donnell နှင့် Grace 1995
P. O'Donnell, AA ကိုကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
နျူကလိယမှ excitatory afferents အကြား Synaptic interaction က prefrontal cortical input ကို၏ neuronshippocampal တံခါးပေါက် accumbens
ဂျေ Neurosci, 15 (1995), စစ။ 3622-3639
Pacheco-Cano et al ။ ၁၉၉၆
MT Pacheco-Cano၊ J. Bargas, S. Hernandez-Lopez, D. Tapia, E. Galarraga
dopamine ကိုတားစီးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တွင် subostrreshold Cs (+) ပါ ၀ င်သည်။
Exp ။ ဦး နှောက် Res, 110 (1996), စစ။ 205-211
Panksepp နှင့် Huber 2004
JB Panksepp, R. Huber
Behav ။ ဦး နှောက် Res, 153 (2004), စစ။ 171-180
ပါကင်ဆန် et al ။ 1999
JA ပါကင်ဆန်၊ MC Olmstead, LH Burns, TW Robbins, BJ Everitt
နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Dissociation apetitive Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူနှင့် d-amphetamine အားဖြင့်အေးစက်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုများ၏အလားအလာအတွက် core နဲ့ shell ကို accumbens
ဂျေ Neurosci, 19 (1999), စစ။ 2401-2411
ပါကင်ဆန် et al ။ 2002
ဂျေအက်ဖ်ပါကင်ဆန်၊ ဂျေဂျီဒယ်လီ၊ RN Cardinal၊ အေဘမ်ဖို့ဒ၊ ခ Fehnert၊ G. Lachenal, N. Rudarakanchana, KM Halkerston, TW Robbins, BJ Everitt
Nucleus accopens dopamine depletion သည် mesoaccumbens dopamine function ကိုရရှိရန် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူ၏ဝယ်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသည်။
Behav ။ ဦး နှောက် Res, 137 (2002), စစ။ 149-163
Pei et al ။ 2004
အယ်လ် Pei, FJ Lee က, အေ Moszczynska, ခ Vukusic, အက်ဖ်လျူ
အဆိုပါ NMDA receptors နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အားဖြင့် dopamine D1 အဲဒီ receptor function ကို၏စည်းမျဉ်း
ဂျေ Neurosci, 24 (2004), စစ။ 1149-1158
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တံခါးခုံနှင့်အတူ Hebbian synapses အားဖြင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု
neuroscience, 81 (1997), စစ။ 303-319
Pennartz et al ။ 1993
CM Pennartz, RF Ameerun, HJ Groenewegen, FH Lopes da Silva
ကြွက်၏နျူကလိယ၏ in vitro အချပ်ပြင်ဆင်မှုအတွက် Synaptic ပလပ်စတစ် accumbens
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci,5(1993), စစ။ 107-117
Petrovich et al ။ 2002
GD Petrovich, ခ Setlow, PC မှာဟော်လန်, အမ် Gallagher
Amygdalo-hypothalamic circuit ကိုသင်ယူတွေကိုမွတ်မပြေနိုင်သော override နှင့်စားမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြု
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 8748-8753
Peyron et al ။ 1998
C. Peyron, DK Tighe, AN van van Pol, L. de Lecea, HC Heller, JG Sutcliffe, TS Kilduff
မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကိုပါဝင်သောအာရုံခံ
ဂျေ Neurosci, 18 (1998), စစ။ 9996-10015
Phillips က et al ။ 2003
PE Phillips, GD Stuber, ML Heien, RM Wightman, RM Carelli
Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်
သဘာဝတရား, 422 (2003), စစ။ 614-618
ပီယပ် et al ။ 1996
RC Pierce, K. ဘဲလ်, P. Duffy, PW Kalivas
ဂျေ Neurosci, 16 (1996), စစ။ 1550-1560
Pontieri et al ။ ၁၉၉၆
FE Pontieri၊ G. Tanda၊ F. Orzi၊ G. Di Chiara
သဘာဝတရား, 382 (1996), စစ။ 255-257
Pratt နှင့်ကယ်လီ 2004
WE Pratt, AE ကယ်လီ
Nucleus accumbens asetylcholine သည် muscarinic receptors ကိုသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်အစားအစာအတွက်စားချင်စိတ်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။
Behav ။ Neurosci, 118 (2004), စစ။ 730-739
Qi နှင့် Adler 1989
YL Qi, ဂျေ Adler
Escherichia coli ဘက်တီးရီးယားရှိဆားအငှားများနှင့် ၄ င်း၏ Mutant တွင်မပါဝင်ခြင်း
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 86 (1989), စစ။ 8358-8362
Ragozzino et al ။ ၂၀၀၁
KE Ragozzino, အက်စ် Leutgeb, SJ Mizumori
Spatial အညွှန်းစဉ်အတွင်း dorsal striatal ဦး ခေါင်း ဦး တည်ချက်နှင့် hippocampal နေရာကိုယ်စားပြု
Exp ။ ဦး နှောက် Res, 139 (2001), စစ။ 372-376
Rahman et al ။ 2003
Z. Rahman၊ J. Schwarz, SJ Gold, V. Zachariou, MN Wein, KH Choi, A. Kovoor, CK Chen, RJ DiLeone, SC Schwarz et al ။
RGS9 basal ganglia အတွက် dopamine အချက်ပြ modulates
အာရုံခံဆဲလျ, 38 (2003), စစ။ 941-952
တဆယ်ရှစ် Bartlett သတိရအောက်မေ့ဟောပြောပွဲသင်ယူခြင်းဆာပအတွက်ဆက်စပ်ဆက်ဆံရေး
Qu ဂျေ Exp ။ Psychol, 43B (1991), စစ။ 1-23
Reynolds နှင့် Wickens 2002
JN Reynolds က, JR Wickens
corticostriatal synapses ၏ Dopamine-မှီခိုပလပ်စတစ်
အာရုံကြော Netw, 15 (2002), စစ။ 507-521
Reynolds က et al ။ ၂၀၀၁
JN Reynolds, BI Hyland, JR Wickens
ဆုလာဘ် -related သင်ယူမှု၏တစ် ဦး ကဆယ်လူလာယန္တရား
သဘာဝတရား, 413 (2001), စစ။ 67-70
Risold et al ။ 1997
PY Risold, RH Thompson က, LW Swanson
hypothalamus နှင့်နှောက် cortex အကြားဆက်သွယ်မှု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
Brain Res ။ Brain Res ။ ဗြာ, 24 (1997), စစ။ 197-254
Robinson နဲ့ Berridge 2001
TE ရော်ဘင်ဆင်, KC Berridge
မက်လုံးပေး - sensitization နှင့်စွဲ
စွဲ, 96 (2001), စစ။ 103-114
Roitman et al ။ 2004
MF Roitman, GD Stuber, PE Phillips, RM Wightman, RM Carelli
ဂျေ Neurosci, 24 (2004), စစ။ 1265-1271
Roullet et al ။ ၂၀၀၁
P. Roullet, အက်ဖ် Sargolini, အေ Oliverio, အေ Mele
ventral striatum သို့ NMDA နှင့် AMPA ရန်ဘက်ပြုသောထိုးနှက်မှုများသည်ကြွက်များတွင်မပေါင်းသင်းသောလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် Spatial information processing ၏အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုထိခိုက်စေသည်
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 2143-2149
Saal et al ။ 2003
Sa Saal၊ Y. Dong၊ အေဘွန်ဒီ၊ RC Malenka
အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခလုတ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေ
အာရုံခံဆဲလျ, 37 (2003), စစ။ 577-582
Sato et al ။ 2001
အမ် Sato, K. Suzuki, အက်စ် Nakanishi
NMDA receptor ဆွနှင့် ဦး နှောက် - ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ယဉ်ကျေးမှု cerebellar granules ဆဲလ်ထဲမှာ mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase အဆငျ့ဆငျ့မှတဆင့် Homer 1a mRNA upregulate
ဂျေ Neurosci, 21 (2001), စစ။ 3797-3805
| Scopus (82) တွင်အားဖြင့် Cited
Schoenbaum et al ။ 2000
G. အ Schoenbaum, AA ကို Chiba, အမ် Gallagher
လေ့လာမှုနှင့်ပြောင်းပြန်သင်တန်းကာလအတွင်း orbitofrontal cortex နှင့် basolateral amygdala အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), စစ။ 5179-5189
| Scopus (126) တွင်အားဖြင့် Cited
Schroeder နှင့်ကယ်လီ 2002
BE Schroeder, AE ကယ်လီ
မော်ဖင်းအကိုက်ပုံဖော်ထားသောဆက်စပ်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အောက်ပါအခြေအနေကိုဖော်ပြသော Fos အသုံးအနှုန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်
Behav ။ Neurosci, 116 (2002), စစ။ 727-732
| Scopus (22) တွင်အားဖြင့် Cited
Schroeder et al ။ 2000
BE Schroeder, MR Holahan, CF Landry, AE Kelley
မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်ကိုဖော်ပြသည်
synapses, 37 (2000), စစ။ 146-158
| Scopus (45) တွင်အားဖြင့် Cited
Schroeder et al ။ 2001
BE Schroeder, JM Binzak, AE Kelley
နီကိုတင်းသို့မဟုတ်ချောကလက်နှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် prefrontal cortical activation ၏ဘုံကိုယ်ရေးအချက်အလက်
neuroscience, 105 (2001), စစ။ 535-545
PDF ဖိုင် (1449 K)
| Scopus (97) တွင်အားဖြင့် Cited
အက်စ် Fisher, အက်စ် Raskin, အေ Raskin (Eds ။ ), CocaineClinical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရှုထောင့်, အောက်စ်ဖို့, နယူးယောက် (1987), စစ။ 212-249
အာရုံခံဆဲလျ, 36 (2002), စစ။ 241-263
Schultz နှင့် Dickinson 2000
ဒဗလျူ Schultz, အေ ​​Dickinson
Annu ။ ဗျာ Neurosci, 23 (2000), စစ။ 473-500
Schultz et al ။ 1997
ဒဗလျူ Schultz, P. Dayan, PR Montague
သိပ္ပံ, 275 (1997), စစ။ 1593-1598
Scott et al ။ 2002
အယ်လ် Scott, MS က Kruse, အိပ်ချ် Forssberg, အိပ်ချ် Brismar, P. Greengard, အေ Aperia
NMDA အဲဒီ receptor activation အားဖြင့် dendritic ကျောရိုးထဲမှာ dopamine D1 receptors ၏ရွေးချယ်တက် - စည်းမျဉ်း
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 99 (2002), စစ။ 1661-1664
Seaman et al ။ 2001
JK Seamans, D. Durstewitz, BR Christie, CF Stevens, TJ Sejnowski
L ကို V prefrontal cortex အာရုံခံမှ excitatory synaptic သွင်းအားစုများ၏ Dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 98 (2001), စစ။ 301-306
et al ။ ၂၀၀၁
ကြည့်ရှုပါ, PJ Kruzich, JW Grimm
အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Dopamine, ဒါပေမယ့် glutamate, အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ကင်းကင်း - ရှာဖွေနေအပြုအမူမှထပ်မံဖြစ်ပွားတဲ့ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အေးစက်ဆုလာဘ် attenuates
Psychopharmacology (Berl ။ ), 154 (2001), စစ။ 301-310
Sesack နှင့် Pickel 1990
SR Sesack, VM Pickel
ကြွက် medial နျူကလိယ accumbens ခုနှစ်, hippocampal နှင့် catecholaminergic ဆိပ်ကမ်း spiny အာရုံခံအပေါ်ဆုံနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရန် apposition ၌ရှိကြ၏
ဦးနှောက် Res, 527 (1990), စစ။ 266-279
Shaham et al ။ 2003
Y. Shaham, U. Shalev, L. Lu, H. De Wit, J. Stewart
မူးယစ်ဆေးဝါး relapsehistory, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ၏ပြန်လည်ထည့်သွင်းမော်ဒယ်
Psychopharmacology (Berl ။ ), 168 (2003), စစ။ 3-20
Sheng နှင့် Lee 2000
အမ် Sheng, SH Lee က
အဆိုပါ NMDA အဲဒီ receptor စက်မှုဇုန်၏ကြီးထွားမှု
နတ် Neurosci,3(2000), စစ။ 633-635
ရှင် et al ။ 2003
DM Shin, M. Dehoff, X. Luo, SH Kang, J. Tu, SK Nayak, EM Ross, PF Worley, S. Muallem
Homer2သည် G ပရိုတင်းနှင့်တွဲဖက်သော receptors များအား RGS protein နှင့် PLCbeta GAP လှုပ်ရှားမှုများအားထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ပြင်းထန်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်
ဂျေဆဲလ် Biol, 162 (2003), စစ။ 293-303
Sideroff နှင့် Jarvik 1980
SI Sideroff, ME Jarvik
Int ။ ဂျေစွဲ, 15 (1980), စစ။ 529-536
ဆေးလ်ဗား et al ။ 1998
AJ ဆေးလ်ဗား, JH Kogan, PW Frankland, အက်စ်ကီဒါ
Annu ။ ဗျာ Neurosci, 21 (1998), စစ။ 127-148
Smith ကနှင့် Bolam 1990
အေဒီစမစ်၊ JP Bolam
ဖော်ထုတ်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏လေ့လာမှုအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ် Basal ganglia ၏အာရုံကြောကွန်ယက်ကို
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci, 13 (1990), စစ။ 259-265
Smith-Roe နှင့် Kelley 2000
SL Smith ကသမင်ဒရယ်, AE ကယ်လီ
အက်တမ်အတွင်းရှိ NMDA နှင့် dopamine D1 receptors ၏ coincident activation သည်နျူကလိယဆိုင်ရာနျူကလိယလေ့လာမှုအတွက်လိုအပ်သည်။
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), စစ။ 7737-7742
Smith-Roe et al ။ 1999
SL Smith-Roe, K. Sadeghian, AE Kelley
striatal subregions အတွက် N-methyl-D-aspartate (NMDA) အဲဒီ receptor blockad ပြီးနောက် radial လက်မောင်းဝင်္တွင် Spatial သင်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း။
Behav ။ Neurosci, 113 (1999), စစ။ 703-717
Steiner နှင့် Kitai 2000
အိပ်ချ် Steiner, ST Kitai
အဆိုပါ striatum အတွက် D1 dopamine receptors အားဖြင့်ကြွက် cortex function ကို၏စည်းမျဉ်း
ဂျေ Neurosci, 20 (2000), စစ။ 5449-5460
ဘဏ္ာစိုးနှင့် Schuman 2001
O. ဘဏ္ewာစိုး, EM Schuman
dendrites အပေါ် Synaptic က်ဘ်ဆိုက်များမှာပရိုတိန်းပေါင်းစပ်
Annu ။ ဗျာ Neurosci, 24 (2001), စစ။ 299-325
ဘဏ္ာစိုးနှင့် Worley 2001a
O. ဘဏ္ewာစိုး, PF Worley
dendrites ရှိ Synaptic sites များသို့အသစ်ဖန်တီး mRNAs များကိုပစ်မှတ်ထားရန်ဆယ်လူလာယန္တရား
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ ယူအက်စ်အေ, 98 (2001), စစ။ 7062-7068 တစ် ဦး
ဘဏ္ewာစိုးနှင့် Worley 2001b
တက်ကြွသော synapses မှအသစ်ဖန်တီး Arc mRNA ၏ရွေးချယ်ပစ်မှတ်ထား NMDA အဲဒီ receptor activation လိုအပ်သည်
Neuron, 30 (2001), စစ။ 227-240 ခ
Stewart က et al ။ ၁၉၈၄
ဂျေ Stewart က, အိပ်ချ်က de Wit, R. Eikelboom
စိတ်ရောဂါ။ ဗြာ, 91 (1984), စစ။ 251-268
Sullivan ကနှင့် Hagen 2002
RJ Sullivan, EH Hagen
စွဲ, 97 (2002), စစ။ 389-400
Sutton နှင့် Barto 1981
RS Sutton, AG မှဘာတို
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း၏ခေတ်သစ်သီအိုရီကို ဦး တည်
စိတ်ရောဂါ။ ဗြာ, 88 (1981), စစ။ 135-170
Sutton နှင့် Barto 1998
Reinforcement LearningMIT စာနယ်ဇင်း၊ Cambridge၊ MA (၁၉၉၈)
Sutton နှင့် Beninger 1999
MA Sutton, RJ Beninger
D1 ကဲ့သို့သော dopamine receptors တွင်အကျိုးရှိသောအချက်ပြမှုအတွက် conditioned rewardevidence ၏ psychopharmacology
Psychopharmacology, 144 (1999), စစ။ 95-110
လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏နှောက် hemisphere ကိုစည်းမျဉ်း
ဦးနှောက် Res, 886 (2000), စစ။ 113-164
သောမတ်စ် et al ။ 2002
KL သောမတ်စ်, ဂျေခန်းမ, BJ Everitt
ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက် zif268 စကားရပ်နှင့်အတူဆယ်လူလာပုံရိပ်ထပ်မံ Contextual နှင့် cued ကွောကျရှံ့သောမှတ်ဉာဏ်၏ပြန်လည်ရယူခြင်းပြီးနောက် activated သည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း dissociates
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 16 (2002), စစ။ 1789-1796
သောမတ်စ် et al ။ 2003
KL သောမတ်စ်, အမ် Arroyo, BJ Everitt
တစ် ဦး discrete ကိုကင်း - ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့အောက်ပါသင်ယူမှုနှင့်ပလပ်စတစ် - ဆက်စပ်ဗီဇ Zif268 ၏ induction
အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci, 17 (2003), စစ။ 1964-1972
Tiffany နှင့် Conklin 2000
ST Tiffany, CA Conklin
စွဲပေးသွင်း, 95 (2000), စစ။ S145-S153
Topple et al ။ 1998
ထိပ်ဖျား, GE Hunt, IS McGregor
ကြွက်များတွင်ဘီယာ - တဏှာ၏ဖြစ်နိုင်သောအာရုံကြောအလွှာ
Neurosci ။ Lett, 252 (1998), စစ။ 99-102
Totterdell နှင့် Smith 1989
အက်စ် Totterdell, Smith က AS
ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် hippocampal နှင့် DA-ergic input ကို၏ convergence ကိုဖော်ထုတ်အာရုံခံအပေါ်သို့
ဂျေ Chem ။ Neuroanat,2(1989), စစ။ 285-298
Ungless et al ။ ၂၀၀၁
MA Ungless, JL Whistler, RC Malenka, A. Bonci
Vivo တစ်ခုတည်းကိုကိုးထိတွေ့မှုက dopamine neuron များတွင်ရေရှည်အလားအလာကိုဖြစ်စေသည်
သဘာဝတရား, 411 (2001), စစ။ 583-587
Vazdarjanova et al ။ 2002
A. အ Vazdarjanova, BL McNaughton, CA Barnes, PF Worley, JF Guzowski
hippocampal နှင့် neocortical အာရုံခံကွန်ယက်များတွင် effector ချက်ချင်း - အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ arc နှင့် Homer 1a ၏အတွေ့အကြုံ - မှီခိုတိုက်ဆိုင်စကားရပ်
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 10067-10071
Vezina et al ။ 2002
P. Vezina, DS Lorrain, GM Arnold, JD Austin, N. Suto
midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုကိုအသိစိတ် amphetamine ကိုလိုက်စားသည်
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 4654-4662
Volkow နှင့်မုဆိုး 2000
nd Volkow, JS မုဆိုး
စွဲ, orbitofrontal cortex ၏မလှူနှင့် driveinvolvement တစ်ရောဂါ
Cereb ။ cortex, 10 (2000), စစ။ 318-325
Vorel et al ။ ၂၀၀၁
SR Vorel, X. Liu, RJ Hayes, JA Spector, EL Gardner
hippocampal theta လှုံ့ဆော်မှုပြင်းပြီးနောက်ကိုကင်းရှာဖွေခြင်းမှပြန်လည်ကျင့်
သိပ္ပံ, 292 (2001), စစ။ 1175-1178
JQ ဝမ်, JF McGinty
ကြွက် striatum အတွက် Acute methamphetamine-သွေးဆောင် zif / 268, preprodynorphin နှင့် proenkephalin mRNA စကားရပ် NMDA နှင့် kainate / AMPA receptors ၏ activation ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Brain Res ။ နွား, 39 (1996), စစ။ 349-357
ဝမ်နှင့် O'Donnell 2001
ဂျေဝမ်, P. O'Donnell
: D (1) dopamine receptors အလွှာ V ကို prefrontal cortical pyramidal အာရုံခံအတွက် nmda-mediated စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုး potentiate
Cereb ။ cortex, 11 (2001), စစ။ 452-462
ဝမ် et al ။ 1994
JQ Wang၊ JB Daunais၊ JF McGinty
NMDA receptors များသည်ကြွက် striatum ရှိ zif / 268 နှင့် preprodynorphin mRNA စကားရပ်များ၏ amphetamine-induced upregulation ကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။
synapses, 18 (1994), စစ။ 343-353
AR အနောက်, AA ကိုကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
လှုပ်ရှားမှုပြည်နယ်များနှင့် in vivo intracellular အသံသွင်းနှင့်ပြောင်းပြန် microdialysis ပေါင်းစပ်ပြီး striatal neuronsstudies ၏ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် endogenous dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor activation ၏ဆန့်ကျင်ဘက်လွှမ်းမိုးမှု
ဂျေ Neurosci, 22 (2002), စစ။ 294-304
White က 1996
စွဲ, 91 (1996), စစ။ 921-949
Wickens နှင့်Kötter 1995
ဂျေ Wickens, R. Kötter
Wickens et al ။ 1996
JR Wickens, AJ Begg, GW Arbuthnott
Dopamine သည်ကြွက် corticostriatal synapses ၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုပြန်ပြောင်းပေးသည်။
neuroscience, 70 (1996), စစ။ 1-5
Wickens et al ။ 2003
JR Wickens, JN Reynolds, BI Hyland
ဆုလာဘ် -related မော်တာသင်ယူမှု၏အာရုံကြောယန္တရားများ
ကြက်သွန်ဖြူ။ ထင်မြင်ချက်။ Neurobiol, 13 (2003), စစ။ 685-690
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 28 (1973), စစ။ 611-616
Will et al ။ 2004
MJ Will, EB Franzblau, AE Kelley
အဆိုပါ amygdala အဆီ၏ opioid-mediated မူးရူးအရသာအတွက်အရေးပါသည်
Neuroreport, 15 (2004), စစ။ 1857-1860
| Scopus (53) တွင်အားဖြင့် Cited
Wilson က 1995
striatal spiny အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်မှုပုံစံမှ cortical အာရုံခံ၏အလှူငွေ
Wilson နှင့် Kawaguchi 1996
CJ Wilson က Y. Kawaguchi
neostriatal spiny အာရုံခံဆဲလ်နှစ်ခု - ပြည်နယ်အလိုအလျောက်အမြှေးပါးအလားအလာအတက်အကျ၏မူလအစ
ဂျေ Neurosci, 16 (1996), စစ။ 2397-2410
| Scopus (391) တွင်အားဖြင့် Cited
Yao et al ။ 2004
WD Yao, RR Gainetdinov, MI Arbuckle, TD Sotnikova, M. Cyr, JM Beaulieu, GE Torres, SG Grant, MG Caron
dopamine-mediated synaptic နှင့်အမူအကျင့်ပလပ်စတစ်၏ထိန်းညှိအဖြစ် PSD-95 ၏မှတ်ပုံတင်
အာရုံခံဆဲလျ, 41 (2004), စစ။ 625-638
PDF ဖိုင် (629 K)
| Scopus (181) တွင်အားဖြင့် Cited
စာပေးစာယူ: အမ်းအီးကယ်လီ, (608) 262-1123 (ဖုန်း), (608) 265-3050 (ဖက်စ်)
မူပိုင်ခွင့်© 2004 ဆဲလ်စာနယ်ဇင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။